OS X အယ်လ် Capitan ကို update လုပ် | ငါက Mac ကပါ
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာလူမှုရေးကွန်ရက်များမှမှတ်ချက်များ၊ စာများနှင့်အခြားသူများမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီး OS X El Capitan အသစ်သို့မွမ်းမံခြင်းမပြုသင့်သည်ကိုယခုအချိန်အထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိသေးသောသုံးစွဲသူများကိုငါတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲပြissuesနာများ (၄ င်း၏တပ်ဆင်မှုကိုခွင့်မပြုသည့် Mac) ကြောင့်မွမ်းမံလို့မရတဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မထားသူများနဲ့သုံးစွဲသူများကိုခွဲခြားခြင်း၊ ဒီပို့စ်မှာပါတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့အဖြေကရှင်းပါတယ်, update နှင့်မြန်မြန်သင်ကပိုကောင်းလုပ်ပါ။
၎င်းသည် interface အဆင့်သို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းအသစ်များအရ operating system အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဆင်ပြေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိထားပြီးဖြစ်သော system tools အမျိုးမျိုးတွင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်တိုးတက်မှုများစွာရှိပါသည်။ မွမ်းမံချက်များနှင့်ပတ်သက်လျှင်နောက်ကျကျန်ခဲ့ခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမကောင်းပါ။
ငါအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာဒီရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖွင့်ချင်တယ် လုံးဝပုဂ္ဂိုလ်ရေး လူအများစုကအသစ်စက်စက်သို့မဟုတ် 'မသိသော' ကိုကြောက်သောကြောင့် Mac ပေါ်တွင်လည်ပတ်နေသည့်လည်ပတ်စနစ်ဟောင်းတွင်တည်းခိုနိုင်သည့်နည်းလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားမည်သို့ထင်မြင်သနည်းဟုမေးကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏အဖြေမှာသင်အမြဲတမ်း update လုပ်ရန် option ရှိပါကပြုလုပ်ပါ, သင့်ရဲ့စက်၌ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ရှိသည်သောအချက်ကို၏အားသာချက်ယူကျန်ရစ်မထားပါနဲ့။
OS X El Capitan လည်ပတ်မှုစနစ်ရောက်ရှိလာသောအခါများစွာသောသူတို့သည်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ယူဆသည်။ (ဗေဒပညာရှင်ဟုထင်သည်) မွမ်းမံရန်တိုက်တွန်းသည်ကိုမခံစားရပါ။ အရာတစ်ခုမှာရှင်းနေသည်မှာ၊ အက်ပဲလ်သည်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များအဖြစ်ထပ်မထည့်ပါ။ ၎င်းသည် OS X Mavericks မှ OS X Yosemite သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော်သင်၏မျက်လုံးသည်မမြင်နိုင်လောက်သောတိုးတက်မှုများကြောင့်အခြားစက်များထက်သင့်စက်သည် OS X El Capitan တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်အာမခံနိုင်သည်။ \_ t operating system ကို၏ optimization။ ဒီတစ်ခုတည်းအတွက်ဒါဟာ update လုပ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စက်ကခွင့်ပြုပါက၊ မကြာကြာစောင့်ဆိုင်းပြီးမွမ်းမံခြင်းကိုမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ငြင်းဆန်သူသို့မဟုတ်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအခိုက်အတန့် မှနေ၍ သင်ခုန်ချသူများထဲမှတစ်ယောက်လား။
အကယ်၍ သင်သည်ဤစနစ်၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုအသစ်ပြောင်းပြီးသိလိုသူများဖြစ်လျှင်၊ လက်လွတ်မခံပါနှင့် OS အယ်လ် Capitan သတင်းအပိုင်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » OS X El Capitan ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကထိုက်တန်ရဲ့လား။
272 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အာတူရို စီပီဒါ ဟုသူကပြောသည်
ငါ Update ကိုပြုလုပ်ပြီးပြီ၊ မှတ်ချက်တစ်ခုပဲ၊ မင်းက Mac Mail မဟုတ်တဲ့တခြားအရာတစ်ခုခုကိုသုံးရင်အီးမေးလ်များကိုအရန်သင့်သိမ်းဆည်းထားဖို့လိုတယ်။ Microsoft က Outlook အား Captain X တွင် run ခွင့်မပြုသည့်အကြောင်းရင်းကိုစစ်ဆေးနေသည်။
Arturo Cepeda သို့ပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်၏ Outlook မေးလ်နှင့်လည်းအခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုပုံမှန်အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းခွင့်ပြုပါ
ဒီ Jordi က EL CAPITAN ကိုကြော်ငြာဖို့ Mac ကိုပေးပြီးပြီလို့ပြောတယ်၊ နေရာတိုင်းမှာပြitနာတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။
ငါ EC install လုပ်ပြီးကတည်းကငါ Firefox ကိုပျက်ကျခဲ့သည်။ မင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကမင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့မောက်စ်ကိုပိတ်ထားပြီးငါ့ကိုပြန်လည်စတင်ခွင့်ပေးတယ်။ Juan vicente
Robert Brin ဟုသူကပြောသည်
OSX El Capitan 10.11.2 အမှားအယွင်းများစွာကိုပြုပြင်ခဲ့ပြီးယခုစတင်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သည် (၅ စက္ကန့်အောက်မဟုတ်ပါ၊ အယ်လ် Capitan ၁၀.၁၁.၁၀ စက္ကန့် ၃၀ ကျော်ကြာသည်)၊ သဟဇာတဖြစ်သောပရိုဂရမ်များ၊ မေးလ်သည်ပြproblemနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်သည်။ Firefox ကိုသုံးသောအခါအရူးသွားသည်၊ အေးခဲသည်။ video card တွင်အမှားအယွင်းများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ Yosemite သည်ပြfirstနာအချို့နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သော်လည်း Maverick Mac နှင့်အတူပျံနှံ့သည်။ မွမ်းမံမှုများစွာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Maverick နှင့် El Capitan, Yosemite မှ El Capitan သို့၊ Maverick မှ Yosemite သို့နှင့် El Capitan) နှိုင်းယှဉ်မှုများသည် USB သို့မဟုတ် DVD Dual မှသန့်ရှင်းစွာတပ်ဆင်ခြင်းသည်ကောင်းစွာ အလွှာ။
ငါ့မှာ MacBook Pro Mid 2012, 8 Gb Ram, 512 Gb SSD HD, OSX El Capitan ။
ငါ့အတွက်တော့တကယ့်ကျရှုံးမှုပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်အမြန်ဆုံး၊ မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးအကြိမ် update လုပ်ခဲ့ပြီးနှေးကွေးစွာစတင်ခဲ့သည်။ ယခုအပတ်၏နောက်ဆုံးအခြေအနေမှာဆိုးရွားနေပြီဖြစ်သည်။ စတင်ရန်မိနစ် ၂၀ ကြာသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သိလျှင် yosemite ကိုငါသိမ်းမည် ငါပုလဲတွေပေါ့၊ ကပ္ပတိန်ဟာဆိုးဝါးတဲ့ဘေးရောက်ခဲ့တယ် .... Mac အဟောင်းနဲ့အသစ်နှစ်ခုစလုံးမှာနှေးကွေးမှုကြီးထွားလာတယ်။ ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမဆိုကျွန်တော်အကြံပြုမပေးပါ
မင်္ဂလာပါရောဘတ်။ ငါ El Capitan သို့မွမ်းမံရန်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖတ်နေစဉ်သင်၌ရှိသောစက်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်တူညီသော်လည်းပြောင်းလဲမှုမရှိပဲ (စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ hard disk နှင့်4ram) နှင့်သင့်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုသည်။ Mac ကနှေးနေပြီ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အကြံပေးနိုင်မလားကျွန်တော်သိချင်တယ်။ SSD အတွက် hard drive ပြောင်းဖို့စဉ်းစားဖူးတယ်၊ ဘယ်မော်ဒယ်ကိုသင်ထောက်ခံသလဲ။ အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟွမ်ဟွမ်၊ မီးစက်စတင်ချိန်မှာစက်စက်ပျက်သွားတယ်။ သူငယ်ချင်း။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
Miguel အေ ဟုသူကပြောသည်
ငါနှင့်အတူတူပါပဲ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအဆက်မပြတ်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ FIREFOX သည်၎င်းအားစကားဝှက်တောင်းရန်တောင်းဆိုသည်၊ mouse သည်နှစ်ကြိမ်တိုင်းပြတ်သည်။ အခြားမောက်စ်တစ်ခုသည်ကေဘယ်လ်နှင့်ပိုကောင်းသည်၊ ။
miguel A. သို့ပြန်သွားရန်
El Capitan ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းပြproblemsနာရှိခဲ့သူအားလုံးအတွက်။ ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်ပါ။ Boot Sound ကိုကြားလျှင် Apple (Command) + R ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ချက်ချင်းဆိုသလို၊ ဘာသာစကားရွေးချယ်မှု ၀ င်းဒိုးပေါ်လာမည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်စပိန်ဘာသာ) ။ Disk Utility, Reinstall, etc စသည်တို့ပါသော ၀ င်းဒိုးတစ်ခုသို့သွားလိမ့်မည်။ အစတွင်၎င်းတစ်ခုခုကိုလျစ်လျူရှုပါ။ Utilities menu ကိုသွားပြီး Terminal ကိုရွေးပါ။ အစမှာပြတင်းပေါက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။
အဓိကဝင်းဒိုး၏ Disk Utility ကကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်မှာအရာအားလုံးအဆင်ပြေသော်လည်းကျွန်ုပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော command များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရာရာကိုပြုပြင်ပေးပြီးနှေးကွေးသောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးသည်။
diskutil command ကိုရေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ discs များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များပေါ်လာလိမ့်မည်။ fsck_hfs -frl / rdiskNsM ကိုရေးပါ။ N နှင့် M သည်ယခင် command တွင်ဖော်ပြခဲ့သောသင်၏ disk ၏ identifiers နံပါတ်များကိုရေးပါ (-frl မသွားလျှင်သင် -fl သို့ပြောင်းပါ) ။ အချို့တွင်သင်မလုပ်နိုင်ကြောင်းနှင့်အခြားသူများအတွက်မူသင်ပြောလိမ့်မည်။ ls -l / dev / disk * ကိုရိုက်ပါ။ တစ်ခုက disk10 သောပေါ်လာသင့်ပါတယ်။ fsck_hfs -fr / dev / disk10 (အကယ်၍ -fr အလုပ်မလုပ်လျှင်သင်ထည့်သည် -f) ကိုရေးပါ။ အခြား disk များကိုစမ်းချင်သောသူတို့သည်သင်မလုပ်နိုင်ဟုသင်ပြောလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်ပြaနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပြီးသွားပြီဆိုလျှင်သင်ဟာ Apple menu ကနေပုံမှန်ပြန်ဖွင့်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ startup ဟာပိုပြီးမြန်ဆန်ပြီးအရာအားလုံးကိုမြန်မြန်ဖွင့်ပေးတယ်။
သင်အဆိုပြုထားသောအရာကိုကြိုးစားကြည့်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားချပစ်သည်။ မည်သည့် sush ဖိုင် (သို့) လမ်းညွှန်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်။ လေးစားပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းညွှန်ပြသမျှကိုငါလုပ်ပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးစုံစမ်းရေးတစ်ခု။ ငါကပ္ပတိန်နှင့်အတူ macbook လိုလားသူ 2015 ကိုဝယ်ခြင်းငှါအကြောင်းဖြစ်၏။
ငါ ၂၀၁၃ ခုနှစ်က Bookpro ကိုသုံးပြီးငါ့မှာ VLC, uTorrent လို software တွေရှိတယ်
နှင့်မီးမြေခွေး (Safari ကကျွန်တော့်ကိုရူးသွပ်စေသဖြင့်) ငါနောက်ဆုံးမှာငါရွှေ့ပြောင်းရမယ်လို့ပြောတယ်
X pro pro del 7. ဖြတ်တောက်ခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်း X ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည် X သည်ကပ္ပတိန်သည်ကျွန်ုပ်အား VLC နှင့် uTorrent ကိုသွင်းခွင့်ပြုပါကဖြစ်သည်
ငါ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ Sierra နဲ့ဒီနှစ် bookpro ကိုဝယ်ရင်ငါထပ်တူမေးခွန်းမေးတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ iMac ကိုအဆင့်မြှင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏မောက်စ်နှင့်ကီးဘုတ်သည်မှားယွင်းစွာပြုပြင်ထားပြီးကျွန်ုပ်သည်မောက်စ်ချိန်ညှိချက်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအဖြေမပေးခဲ့ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်မြှောက်လိုသောသို့မဟုတ်လျှော့ချလိုသောအခါအင်တာနက်စာမျက်နှာများကိုမောက်စ်ဖြင့်မဆင်းနိုင်တော့ပါ။ volume ကဘာလုပ်တာလဲ windows ကိုပိတ်ပါ။ မတက်ဘဲမနေဘူး၊ ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူး။
david sanchez အားပြန်ပြောပါ
Carlos Olmos ဟုသူကပြောသည်
ငါလက်ရှိ Mac ကို update လုပ်နေပြီ၊ OS အသစ်လည်ပတ်ပြီးတာနဲ့ငါရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုငါထားခဲ့လိမ့်မယ်။
Carlos Olmos ကိုပြန်သွားပါ
၂၀၁၁ ခုနှစ်နှစ်လယ်လောက်က Yosemite နဲ့အတူကျွန်တော့်ရဲ့ MacBook တော်တော်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် El Capitan ယင်ကောင်တွေ၊ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့လျင်မြန်စွာလည်ပတ်မှု၊ အမူအယာများနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ scrolling များနှင့်အတူ FOtos သည်အရာရာကိုပြင်ဆင်သော်လည်းအိုင်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုစည်းညှိမထားဘူးဆိုတာပဲ ဖြစ်သင့်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Mail, Safari ကဲ့သို့သောစိတ်ကူးယဉ်ရွေးချယ်စရာများ။
ငါ့မှာ macbook air ရှိတယ်၊ application တွေဖွင့်တာ၊ browsing စတာတွေစတာနဲ့အမြန်နှုန်းတိုးလာတယ်။
ငါ update ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါသတိထားမိတာတစ်ခုကတော့ trackpad အမူအယာများမှာ folder တစ်ခု (သို့) icon တစ်ခုကိုအခြားနေရာတစ်နေရာသို့ဆွဲယူ။ မရပါ။
မင်းပြောချင်တာက '3 finger drag' option ကိုဆိုလိုသည်။ ယခုသင်က၎င်းကို 'accessibility' control panel တွင် 'trackpad and mouse' ကဏ္inတွင် activate လုပ်ရမည်။ 'trackpad options' ဆိုသောခလုတ်ကိုသင်နှိပ်မိလျှင် (သို့မဟုတ်အလားတူအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ Mac ရှေ့တွင်မရှိသောကြောင့်) ၎င်းကိုဖွင့်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
... ငါ iso ပုံရိပ်ကိုဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါက update လုပ်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ထင်! လုံးဝ! ကျွန်ုပ်၏ Macbook Air သည် OS X El Capitan နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ဟုခံစားမိသည်၊ ၎င်းသည် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ မွန်းတည့်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ် update လုပ်ပြီးယခင်ကကျွန်ုပ်တွင်အခက်အခဲမရှိသောဆာဗာတစ်ခုကိုဖွင့်တိုင်းတိုင်းရပ်တန့်သွားသည်။ အမှန်တရားမှာတပ်ဆင်မှုတွင်တစ်ခုခုမှားယွင်းနေသော်လည်း၎င်းသည်ကံမကောင်းခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါလူတိုင်းပြီးပြည့်စုံသောအကျင့်ကိုမြင်ရပေမယ့်ပြေး Yosemite သို့ပြန်သွားကြပြီ
Jordi: အကြံဥာဏ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ Snow Leopard ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးခဲ့ပြီ မင်းက Captain ကိုအဆင့်မြှင့်ဖို့တကယ်ကိုထိုက်တန်တယ်လို့ထင်သလား။ အကယ်၍ အဆင့်မြှင့်တင်မှုမပါရှိပါကသင် install လုပ်သည့် disc နှင့် Snow Leopard ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်ပြhaveနာရှိပါသလား။ ငါမှတ်ချက် / အကြံပေးချက်ကိုတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Hello Gambu၊ အကယ်၍ သင့်တွင် SL (သို့) USB installation DVD ရှိရင်သင့်မှာပြသနာမရှိဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုပြန်ပြီး install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မင်းဘာပြproblemနာမှပြန်လာစရာမလိုဘူး။
Axel Martinez ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ရှိပါကစနစ်သည်သင့်အားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုခွင့်မပြုသောကြောင့်၊ သင်လုပ်နိုင်သည်မှာစက်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးကွန်ယက်ပြန်လည်ဆယ်တင်မှုထဲသို့ဝင်ရန်ဖြစ်သည် (cmd + alt + r) ။ ထိုအချိန်တွင်သင်၏ hard drive အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပြီးသင်ဝယ်ယူထားသော operating system ကို download လုပ်သည်။ ခင်ဗျားအင်တာနက်ပေါ်မှာသင်ခန်းစာအမြောက်အများကိုတွေ့တယ်၊ ငါအဲဒီလိုလုပ်ရမယ်၊ ငါမသိတဲ့ beta ကိစ္စအတွက် yosemite မှ mavericks သို့ MATLAB မှတဆင့်ကူးယူရတယ်။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့တရားဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Regards!
ဟယ်လို! စက္ကူကပ်တွေကိုဘယ်လိုပြန်ရနိုင်မလဲသိလား။ ငါ့မှာပစ္စည်းအားလုံး (ဂဏန်းပေါင်းစက်၊ စတစ်ကာမှတ်စုများစသည်) ရှိသည့် pad သည်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုတာကိုယခုတိုင်အောင်ငါသဘောပေါက်သည်။ ငါမှတ်စုထဲမှာငါရေးခဲ့သောဒေတာလိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမကြာမီငါ့ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်နှင့်ကူညီပေးပါတယ်။
သင် "dashboard" အတွက်မီးမောင်းထိုးခြင်းသို့မဟုတ် F4 ခလုတ်ဖြင့်ရှာဖွေခြင်း၊ dashboard လျှောက်လွှာကိုရှာဖွေခြင်း၊ သင် pad ပါနှင့်မှတ်စုများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Juan Olivos ဟုသူကပြောသည်
ငါမှာ Gambu နဲ့တူတယ်၊ ငါ့မှာ iMac မှာ ၁၀.၈.၅.၅ ရှိပြီး OS ကို El Capitan သို့မပြောင်းရန်တွန့်ဆုတ်နေတယ်။ ငါဗေဒနှင့်တစ် ဦး ထင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အကျိုးကျေးဇူးများထက်အများကြီးပိုတိုင်ကြားမှုများနှင့်ဝေဖန်မှုများကိုရှာပါ။ ငါအရင်သုံးထားသောဟောင်းနွမ်းသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်သောဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်သည့် Burn၊ ArtFiles၊ scan ဖတ်ရန်နှင့် Adobe CS10.8.5 suite ကဲ့သို့ဆုံးရှုံးမှုသည်ကျွန်ုပ်အားစိုးရိမ်သည်။ သူတို့သည်အခြားသူများထက်ပိုမြန်သောကြောင့်။ အပြောင်းအလဲကိုလုပ်ရန်တကယ်မှန်ကန်ပါသလား။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုမွမ်းမံရန်တောင်းဆိုသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ Safari နှင့် Apple Store ရှိ Twitter စာမျက်နှာကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်
Juan Olivos ကိုပြန်ပြောပါ
ချစ်ခင်ရပါသော၊ ကပ္ပတိန်သည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းသင်ယခင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင်ထည့်သွင်းပါကအမှားများစတင်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရကျွန်ုပ်စင်ကြယ်စွာတပ်ဆင်ခဲ့သော Mac ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ကူးယူပြီး၊ စနစ်သည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်တော်အဲဒါကိုသင့်အားအကြံပြုပါသည် လေးစားပါတယ်
ငါ Rafa နဲ့သဘောတူတယ်
Yosemite မှာလုပ်ခဲ့သလိုငါ "လက်ချောင်း ၃ ချောင်းနဲ့ဆွဲ" လို့မရဘူး။ Toni ကိုဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာစစ်ဆေးနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် function ကမပေါ်လာဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ မှတ်ချက်။ ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ၁၃ လက်မ MacBook Air ရှိတယ်
Manuel Martinez သူငယ်ချင်း ဟုသူကပြောသည်
Manuel Martinez Friend အားစာပြန်ပါ
လူကြီးလူကောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်မွမ်းမံရန်ကြိုးပမ်းမှု၊ အကယ်၍ totalfinder သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ (သင်ကပ္ပတိန်ယူဆောင်လာသည့်လုံခြုံရေးအသစ်ကိုမပိတ်ထားပါက) Vuze ဖမ်းမိသွားသည်။ Acrobat ကို update လုပ်သည့်အခါ system ပျက်သွားပြီးအေးခဲသွားလိမ့်မည်။ Yosemite နှင့်အတူ Arcronis စစ်မှန်တဲ့ပုံရိပ်မိတ္တူတစ်ခုရှိခဲ့ပြီ။ ယခုငါ0မှစတင်မည်၊ ဗားရှင်းများစွာကိုငါ Update လုပ်ခဲ့ပြီးမည်သည့်အခါမျှပြaနာမရှိခဲ့ပါ။
အခြား OS တစ်ခုသို့ပြောင်းသောအခါကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းကိရိယာများသည်ထိုသို့သောတိုးတက်မှုကိုသတိမပြုမိခဲ့ပါ။ ကောင်းတယ်
OS X El Capitan လည်ပတ်မှုစနစ်ကကျွန်တော့်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပုံရတယ်။ update မတိုင်မှီဖွင့်မရတဲ့ PGP နှင့် TrueCrypt ပြသနာများသာရှိတယ်၊ ဘယ်သူ့မှာဖြေရှင်းချက်ရှိသလဲ ။—
ဒံယလေက Moreno Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ငါ el capitan ၏ download ကိုခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားနှင့်ယခုငါ download, မဆိုအကူအညီသို့မဟုတ်အကြံဥာဏ်ကိုပြန်လည်စတင်နိုင်သလား?
Daniel Moreno Rodriguez အားပြန်ပြောပါ
ဟုတ်တယ်၊ ငါနဲ့ထပ်တူထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ခဲ့တယ်။ Launchpad ကိုထည့်သွင်း။ လျှောက်လွှာကိုဖျက်ပါ။ (အိုင်ကွန်များတုန်ခါနေသည်အထိနှိပ်ပါ) နောက်တစ်ခါ upload ကိုပြန်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ခြစ်ရာမှစတင်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော်ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
ငါဟာ Yosemite ကို install လုပ်တဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ စာမေးပွဲတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ငါတောင်ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ငါ update လုပ်တာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့တွေ updates တွေရတိုင်းအရင်းအမြစ်တွေပိုလိုတယ်၊ ဒါမှငါတို့ပစ္စည်းတွေကိုပြောင်းရမယ်
သင့်မှာဘက်ထရီသက်တမ်းပြaနာရှိပါသလား။ ငါ့မှာ 13″ macbook pro ရှိပြီးဘက်ထရီက ၇ နာရီမပြည့်မှီ ၄ နာရီထက်မပိုဘူး။ App Store သို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တွင်အခက်အခဲများရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်တောင်းရန်တောင်းဆိုသောကြောင့်ဘီးသည်လည်ပတ်နေပြီးအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။
အက်ဆစ်လောင်ကျွမ်းမှု ၆၆ ဟုသူကပြောသည်
၇ နာရီမပြည့်ခင်ဘက်ထရီပြproblemsနာရှိနေဆဲ ၄ ခုကြာပေမယ့်ငါဘက်ထရီကိုဆက်စစ်ဆေးတယ်။ ၂ လအကြာမှာငါဘက်ထရီကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး၊ နောက်တစ်ခုဝယ်လိုက်တယ်။ ကွန်ပြူတာကို light connector မှအဆက်ဖြတ်ရန်မလိုတော့ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၎င်းကိုအဆက်ပြတ်ပါက mac သည်ပိတ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားဘက်ထရီကို ၀ ယ်လိုက်သည်။ အသားကအဆက်ဖြတ်လိုက်လျှင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာဆွဲထုတ်နိုင်သော်လည်း ၇ နာရီမျှကြာတော့သည်။ တူညီတဲ့7နာရီငါဘက်ထရီကိုပြုပြင်ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရတယ်။ အက်ပ်စတိုးမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိဘူး၊ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့မွမ်းမံမှု ၂ ချက်ရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါလုပ်ရမယ့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသွားပေမယ့်ဘာမှမပေါ်လာဘူး၊ ဝင်းဒိုးကိုနှိပ်ပြီးနောက်မြင်ရတဲ့နောက် ထိုနံပါတ်ကိုမြင်လျှင်၊ သင်တို့ကိုငါတောင်း။ တောင်းပန်လျှင်၊ နှစ်ခြမ်းကိုမွမ်းမံရမည်၊ ဝယ်ပါ၊ အခြားသောသည်အဘယ်အရာကိုမျှမပေါ်ပါ။ ကပ္ပတိန်အားအသစ်ပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်နာကျင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဘာမျှမပေါ်လာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Ultramixer နှင့်အတူဂီတကိုရောနှော။ Captain သို့မွမ်းမံသောအခါ၎င်းသည်ခေတ်ကုန်သွားပြီဖြစ်သော java6ကို install လုပ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိ java ကိုခြေရာခံပြီးလက်ရှိအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပြသနာများရှိပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ ငါသိတယ်၊ မင်းပြောတာကိုမင်းပြောမယ်ပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငရဲကိုငါလက်ရှိရောရှိပြီးကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာလုံးဝ java ကိုသုံးတဲ့ရောနှောစက်ကိုငါဘာကြောင့်လိုချင်တာလဲ။ ငါ့အလုပ်အတွက်တော့အဲဒါဟာငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးပဲ။ t ကဆုံးရှုံးချင်တယ်။ ငါ Ultramixer ၏ဗားရှင်းသည်လက်ရှိဖြစ်သည်။ ရိုက်နှက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
iMac 21 with နှင့်အတူ Gran Capitan ပြproblemsနာများ၊ ကျွန်တော့်ကိုအရင် install လုပ်ပြီးသေးငယ်သည်မဟုတ်ဘဲပထမ ဦး ဆုံးပြproblemsနာများကိုစတင်ခဲ့သည် -
- ကျွန်ုပ်၏ SD ကဒ်များကိုမဖတ်ပါ
- ကျွန်ုပ်၏ USB avermedia TV ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်ပေးလိုက်သောအခါ၎င်းသည် USB output ကိုပိတ်ထားသည်
ကမာငါသင်ပြောသောအရာကိုလက်လွတ်။ SD, USB နှင့် DVD များ၏ပြproblemsနာများသည် update ကိုထက် hardware ကိုယ်တိုင်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ပိုတူသည်ဟုတ်သလား?
ငါနဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ အဲဒါဟာကျွန်တော့် SD မှတ်ဥာဏ်တွေကိုမဖတ်တော့ဘဲ USB adapters နှင့်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါ။ : '
Ami သည်၎င်းကိုထည့်သောအခါ SD ကဒ်ကိုမဖတ်ပါ။ ကွန်ပျူတာကထည့်ထားသည့် disk ကိုကွန်ပျူတာမဖတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါကရွေးချယ်စရာ (၃) ခု (initialize) (လျစ်လျူရှု) ပေါ်လာသည်။ အီးမေးလ်က reyskdj@gmail.com...
Alfonso Martin-serrano ဟုသူကပြောသည်
ငါ install လုပ်သည့်အခါ, miguel ငါ့ကို avermedia တီဗီကိုအသိအမှတ်မပြု, ငါဖယ်ရှားနှင့်ငါ aver တီဗီ၏ cd ကိုပြန်လည် install လုပ်သည့်အခါ, ထို osX ၏ဤဗားရှင်းနှင့်သဟဇာတမဟုတ်ကြောင်းငါ့ကိုပြီးသား install လုပ်သည့်အခါ, ငါ့ကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပျက်
Alfonso Martin-serrano အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ Miguel၊ Yosemite မှ El Capitan သို့ကျွန်တော်အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်ကစပြီးကျွန်ုပ်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်နေ့တိုင်း Apple ပညာရှင်များနှင့် (၃) ကြိမ်တိုင်စကားပြောခဲ့ပြီးဖြေရှင်းနည်းများမှာအလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာ၏ USB ကိုကုန်သွားပြီဖြစ်သည်။ တိုတိုငါပြsoနာများစွာနှင့်အတူထူးခြားတဲ့တစ်ခုဖြစ်ရပါမည်
El Capitan ကို scratch မှ install လုပ်ပါ။
၁။ အက်ပဲလ်တီဗီ (ဒုတိယမျိုးဆက်) ကိုသူအသိအမှတ်မပြုပါ။ Yosemite လိုပဲကျွန်ုပ်သည်ဖန်သားပြင်ကိုထင်ဟပ်ပြသရန်ခွင့်မပြုပါ။
၂။ အီးမေးလ်များကိုဖျက်သောအခါအီးမေးလ်များကို inbox ထဲသို့ပြန်ထည့်ပြီးဖျက်ပစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
၃။ ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်သည်တစ်ခါတစ်ရံအရူးအမူးဖြစ်တတ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်စတင်ရေးသားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမပေးနိုင်၊ မဖြုတ်နိူင်ပါ။ တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းမှာဘက်ထရီများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးပြန်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
အမြန်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်သတိမပြုမိပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဘာမျှမလုပ်ပါက၎င်းသည်အပူချိန် (၆၀ ဒီဂရီ) တွင်အလုပ်လုပ်ကြောင်းဖွင့်ပါ။
ငါထင်တာကတော့အက်ပဲလ်ဟာနည်းနည်းလေးရှုံးသွားတယ်၊ operating system အသစ်တစ်ခုကိုသူတို့မထုတ်ပြန်ခင်တွင်၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးယခုအခါသူတို့သည်အပတ်စဉ်ဖြည့်စွက်မှုများပြုလုပ်ရန် betas များဖြစ်နေပုံရသည်။ Yosemite ဆီကိုပြန်မသွားဘူးလားမသိဘူး
Apple TV မှာ JB ရှိလား။ ငါ့မှာ Apple TV 1 ရှိတယ်၊ AirPlay ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။
2 - Hotmail ဖြင့်မည်သည့်မေးလ်ဖြစ်နိုင်သနည်း။ ဒီအမှားအကြောင်းကိုငါတို့ဘာမှမဖတ်ဘူး၊ သင်ဖြေရှင်းလိုက်ရင်ငါတို့အားပြောပြပါ။
3 - ဒီဟာကဆော့ဗ်ဝဲပြproblemနာလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး၊ Miguel နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် Hardware ဟာပြproblemနာတစ်ခုနဲ့ပိုတူတယ်။
ဟိုင်းဂျိုဒီ၊ Apple TV မှာ JB ရှိတယ်။ မေးလ်တွင် iCloud အကောင့်အပြင် Hotmail အကောင့် (outlook.es) ပါရှိသည်။ (ပြသခြင်းကအသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်က ၀ ယ်သည်။ ) ကျွန်ုပ်ဆိုင်းငံ့ထားချိန်မှပြန်လာသောအခါပြtheနာဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ဟာ့ဒ်ဝဲကြောင့်လို့မထင်ပါနဲ့
ကံပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အရာ။ သင်အဖြေရှာတွေ့လျှင်ဤနေရာတွင်ရေးရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။ အခြားအသုံးပြုသူများအတွက်လည်းအသုံးဝင်သည်။
Hardware ပြproblemနာမရှိပါဘူး၊ yosemite ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး usb သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ sd, tv avermedia၊ ကျွန်ုပ်သည်ကြီးစွာသောကပ္ပတိန်ကိုတပ်ဆင်ရန်ပြန်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာမျှမကျန်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ canon ၏ဓာတ်ပုံများကိုတောင်မပို့နိုင်ပါ။ ငါ hard disk သို့မဟုတ်ပရင်တာထားလျှင်သူကအသိအမှတ်ပြုထားသည်။
ဟိုင်းရှားလော့ခ်။ ပန်းသီးတီဗီမှအပကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ငါ update လုပ်ဖို့, ခြစ်ရာကနေ install လုပ်ဖို့ဒေတာနှင့်အတူမိတ္တူပြန်လည်ထူထောင်ရေး, ခြစ်ရာကနေ install နှင့်လက်ဖြင့်အရာအားလုံးကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့, အဆုံး၌ငါ Yosemite သို့ပြန်လာနှင့်အရာခပ်သိမ်းချောချောမွေ့မွေ့သွားသည်။ ရယ်စရာကောင်းတာက MacMini i7 ဆိုတာပျက်ကွက်တဲ့နေရာပါ။ ၂၀၀၉ White Macbook မှာ Silk နဲ့တူတယ်၊ ခြားနားချက်ကတော့ OS မှာအပြင် Operating System နဲ့တခြားနည်းနည်းသာရှိပါတယ်။
အရမ်းကောင်းတယ်၊ ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ဆိုင်းထိန်းစနစ်ကနေပြန်လာရင်အရူးဖြစ်သွားတယ်။ ငါရွေးစရာမရှိတော့ဘူး။
Ariel Retamal ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
အရေးတကြီး ... ငါ update ကိုလုပ်ပြီး Mac ကိုယခုမဖွင့်ပါ။ ငါ့ကိုဘယ်သူကူညီသလဲ။
Ariel Retamal အားပြန်ပြောပါ
ဟိုင်း !! ငါ update လုပ်ပြီးသောအခါ screen ကို restart လုပ်လိုက်ရင် blank ဖြစ်နေသည်။ apple icon နှင့် status bar တွင်ရွေ့လျားနေခြင်းမရှိဘဲ ... ကွန်ပျူတာသည်လုံးဝအေးခဲနေပြီး၎င်းအား shut down လုပ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရမည်။ ကံကောင်းတာကကျွန်တော့်မှာ OSX maverick နဲ့မိတ္တူတစ်ခုရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ရင်ငါသေတယ်။ ဒီဟာကမကြာခဏဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူ့ကိုမှသိတာလား။
ဟုတ်ကဲ့ပါပလော၊ ကျွန်တော့်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်၊ ငါကီးဘုတ်ပေါ်က command တွေကိုသုံးပြီး mac ကို recovery format လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါပြန် install လုပ်လိုက်တယ်၊ ပုံမှန်အားဖြင့်သူကသင့်ရဲ့နောက်ဆုံး version ကိုပြန်လည် install လုပ်လိုက်တယ်။ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်မသိမ်းဆည်းပါကသင်ဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက်၎င်းသည်သန့်ရှင်းပြီးအလွန်ကောင်းစွာလည်ပတ်လိမ့်မည်
ရှင်ပေါလု Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ဖြန့်ချိခြင်းမပြုမီ Beta, alpha, delta ဗားရှင်းများသို့မဟုတ်သင်ခေါ်ချင်သည့်အရာအားလုံးရှိသလား။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည် Outlook 2011 ကိုစဖွင့်ပြီးနောက်စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှအေးခဲနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသိသာတဲ့စိတ်အညစ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။
Ariel ကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ MacBook Air တွင်အယ်လ် Capitan ကိုတပ်ဆင်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား user ည့်အသုံးပြုသူထဲ ၀ င်ခွင့်ပေးပြီး Safari ကိုသာသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေခြင်းကြောင့်၎င်းကိုရေးသားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Mac 21 မှာပြသနာမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ Air user ကို ၀ င်ခွင့်မရရင်ငါသေပြီ။ ငါဟာအခြား devices တွေမှာမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုသုံးရတယ်။ ငါ့ကိုသင်လိုအပ်မယ်လို့စွမ်းရည်ပေးဆောင်ပါဘူး) ။
Update ပြီးနောက် Captain နှင့်ဓါတ်ပုံများချိတ်ဆက်သောအခါ "Updating" တွင် ၁၈% ရှိသည်။ အဲဒီမှာကအဲ့ဒီအချိန်မှာ။ ဘာအကြံပေးလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ IMac တွင် El Capitan ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ။ ၎င်းကိုဖွင့်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာပန်းသီးနှင့်ဘားမတင်ဘဲဘားတန်းနှင့်အတူလွတ်သွားပါတယ်။ ငါ Cmd + R ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်သည်။ ငါထပ်မံပိတ်လိုက်ပြီးထပ်တူထပ်ဖြစ်ပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါ Time Machine ကနေ reboot လုပ်လိုက်တယ်။ ငါကွန်ပျူတာကို loaded ကြသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးပါ။
သင်တစ် ဦး တပ်ဆင်ခခြစ်ရာကနေသယ်ဆောင်ခဲ့သလား အချိန်စက်မှ reboot? ကျွန်တော်တို့ကို Mac ကဘာလဲဆိုတာနှင့်ပတ်သက်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးပါ။
မင်္ဂလာပါဂျိုဒီ၊ YOSIMITE နဲ့စက်ရုံကနေလာတဲ့ MacBook Pro (Retina၊ ၁၃ လက်မ၊ ၂၀၁၄ နှစ်လယ်ပိုင်း) ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် EL CAPITAN ကိုတိုးမြှင့်လိုက်တာနဲ့ဘက်ထရီသက်တမ်းနည်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဘက်ထရီပြdelနာသည်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်စွမ်းအင်ကိုများစွာမသုံးစွဲသင့်ပါ။ အကယ်၍သာ အနည်းငယ်သာဖြစ်ပါကပုံမှန်ဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်သည်၊ ၎င်းသည်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းခံရလျှင်သင်သည်စပိန်နိုင်ငံတွင် ၂ နှစ်တာကာလကတည်းကအာမခံချက်ကို သုံး၍ အက်ပဲလ်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ငါကဟာ့ဒ်ဝဲပြproblemနာမဟုတ်ဘူး အကယ်၍ ဘက်ထရီသည် software နှင့်အလွန်သင့်တော်ပြီးသင်၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်ခဲယဉ်းပြီး၎င်းသည်ယခင်ကထက် ၃၀% သာကြာလျှင်၊ အမှားတစ်ခုခုဖြစ်သင့်ပြီး၊ software အသစ်တွင်စွမ်းအင်အားလုံးကိုသုံးစွဲသောအမှားတစ်ခုရှိရမည်။ ၎င်းသည် OS X Lion (၇ နာရီလင်းနို့) နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးယခုမအောင်မြင်သော "El Capitan" (၃ နာရီကြာလျှင်)
ဒါတွေအားလုံးအတွက်စိတ်မကောင်းစရာကတော့ Apple ရဲ့ပါရမီရှင်များကသက်ဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုများကိုထုတ်ပေးရန်အတွက် ၁-၂ လလောက်စောင့်ရမယ်။
အေးအေးဆေးဆေးပဲ၊ ငါလည်းဖြစ်တာပေါ့၊ ဒီနောက်ဆုံးစနစ်ကအရင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးပြုမှုကြောင့်စုဆောင်းမိတဲ့ junk files တွေကြောင့်ယခင်အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်းနောက်ဆုံးဆော့ဖ်ဝဲလ်ချိတ်ဆွဲထားသည်။ အတင်းအဓမ္မနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာဟောင်းကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်စွန့်ခွာသွားသည်၊ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့် (အသံပြီးနောက်) command ကို + R နှင့် utilities တွင်သင်၏ mac ကိုဖွင့်သောအခါ (mac ပြီးနောက်) ကျွန်ုပ် mac ပေါ်တွင် recovery format ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ reinstall option ကိုပြန်သွားပါ။ မူလဆော့ဖ်ဝဲလ်မပျက်စီးခင်နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုကွန်ယက်မှတပ်ဆင်ပါလိမ့်မည်။ အချိန်တော်တော်ကြာလိမ့်မယ်၊ ငါ့အမြန်နှုန်းကသိပ်မတော်ဘူး၊ ၆ နာရီလောက်ကြာတယ်။ အခုတော့ငါ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ mac run နေပြီးပြproblemနာမရှိဘူး။ တကယ်တော့ကပ္ပတိန်ကငါ့အတွက်အရမ်းတော်တယ်။
Rolando Andrade ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းတယ် Mac ကပိုမြန်တယ်ဒါပေမယ့် Outlook ကအဆက်မပြတ်ပျက်သွားတယ်။ ငါအလုပ်မလုပ်နိုင်လို့သူတို့မကြာခင်မှာပဲဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်
Rolando Andrade အားပြန်ကြားပါ
ရာအူးလ် Cortes ဟုသူကပြောသည်
ဤပြforနာအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း LINK ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ရှိနိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤ patch ကိုတပ်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ ပြproblemနာသည်ဆာဗာနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းဖြစ်သည်။
Raul Cortes အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်လုံးဝမအောင်မြင်ပါ ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ် imac ကိုအပြီးသတ်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် timemachine backup ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ) အရာအားလုံးမှန်ကန်စေသည်။ ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ရွှေ့ပြောင်းလက်ထောက်ကို activate လုပ်တဲ့အခါပြန်လည်စတင်သွားတဲ့အခါ၊ ပန်းသီးနှင့်၎င်းသည်မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကို spikes အနည်းငယ်နှင့်ပြည့်စေပြီး၎င်းကိုပိတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ငါနောက်ဘက်ခလုတ်ကိုပိတ်ထားနှင့်စတင်သောအခါဆွဲထားတဲ့။ ငါ timemachine ၏မိတ္တူ yosemite နှင့်အတူပြန်ယူ။ အရာအားလုံးနောက်တဖန်ပုံမှန်ပါပဲ။ ငါ 24 ကြိမ်ကွဲပြားခြားနားသောတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများကြိုးစားခဲ့သည်နှင့်ဘာမျှမတူညီသောပြproblemနာကိုဆက်လက်ပြီး။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အချက်အလက်များကို migrant wizard ဖြင့်ပြန်လည်ရယူသည်အထိအရာရာအားလုံးကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားပုံရသည်။ ငါတပ်ဆင်ခြင်းကိုခြစ်ရာကနေစတင်သောအခါငါ timemachine ၏မိတ္တူကိုရယူရန်ကြိုးစားသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီလေ့လာတွေ့ရှိ ကော်ပီအဟောင်းတွေကိုမသိဘူး ကျွန်ုပ်နိဂုံးချုပ်သည်ဤ operating system သည်အလွန်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပြီးပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည် system ကိုရှင်းလင်းပြီးသုတ်လိမ်းပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ဖတ်နေသော bug အမြောက်အများကိုဖြေရှင်းပြီးသည်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကတင်ပြသည်အထိကျွန်ုပ်သည် yosemite ကိုဆက်လုပ်မည်ဟုထင်သည်။
Wizard မပါဘဲအက်ပ်များကိုတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သလား။ အကယ်၍ သင် install လုပ်ခြင်းနည်းလမ်းအားလုံးကိုကြိုးစားသည်ဟုပြောပြီး၎င်းသည်သင်ပြန်လည်စတင်သောအခါသင်၏ iMac ကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်ဆိုပါက၎င်းတို့ကိုတစ် ဦး ချင်းစီတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါမည်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်က ၂၄ လက်မ iMac လား။
Hello Jordi၊ ကျွန်ုပ်အားပြန်ကြားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၂၄ ရက်မှ imac ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ လက်ထောက်ကအချက်အလက်များကိုသာမကစာရွက်စာတမ်းများကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းမရှိပဲပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားထပ်တူအမှားထပ်မံပေးခဲ့သည်။ စဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲဒါကို load လုပ်လိုက်တယ်။ အခုငါမွမ်းမံမှုကိုစွန့်လွှတ်တော့မယ်။
ဟင်အယ်လ်ဖွန်ဆိုဟမ်၊ မင်းရဲ့မှတ်ချက်ကငါ့ရဲ့သံသယကိုအတည်ပြုတယ်။ တကယ်လို့ငါတို့ကအသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုသို့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်၊ အဟောင်းကိုမမေ့သင့်ဘူး၊ ဒါကအမြဲတမ်းထွက်လာလိမ့်မယ်၊ Captain ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သည်ကတည်းကသင်၏ပရိုဂရမ်များနှင့်အတူ၎င်းကိုသင်ခြစ်ရာကနေ install လုပ်ပြီးသင်၏ပရိုဂရမ်များကိုထပ်မံတပ်ဆင်ရမယ်၊ ပြင်ပ disk တွင်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းပြီးပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမည်၊ အကယ်၍ သင်သည်အချိန်စက်ကိုယခင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲမှဒေတာနှင့်ထည့်ပါကသင်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ Yosemite နှင့်အတူ Mac ၏ El Capitan update ကိုကျွန်ုပ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်မပြေးမှီတိုင်အောင်အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ ပြီးသွားသောအခါ၎င်းသည် boot မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ပန်းသီးအိုင်ကွန်နှင့်တွဲဖက်ပြီးကျွန်ုပ်ပြန်လည်စတင်။ မရပါ။ ငါကီးဘုတ်ရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးကိုကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမှာ Time Machine backup မရှိဘူး။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Cmd + R ဖြင့် reboot လုပ်ပြီးထပ်မံတပ်ဆင်ပါ။ အဲလက်စ်အရန်သင့်မရှိခြင်းကိစ္စ ...
ဟိုင်းဂျိုဒီ၊ ပြသနာကိုကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်မှာ ၁၀.၁၁ ဗားရှင်း၊ သို့သော်၎င်းကိုစတင်ဖွင့်သည့်အချိန်တွင် ဆက်၍ ဆွဲထားသောကြောင့်၎င်းကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ရပါသည်။ ၎င်းကိုဖယ်ရှားပြီး Yosemite ကိုသိမ်းဆည်းရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ သို့မဟုတ်အခြားဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုရှိသေးသည်။
ဟိုင်းအဲလက်စ်၊ မင်းကငါနဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲ။ တပ်ဆင်မှုပြီးခါနီးတွင် Cmd + R ဖြင့် reboot လုပ်ပြီး El Capitan ဗားရှင်း 10.11 ဖြင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်သည် (Yosemite ကို crash မတိုင်မီပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ) ထိုအခါတပ်ဆင်မှု၏အဆုံးမှာနောက်တဖန်ဆွဲထားတဲ့။ Time Machine သို့ Backup လုပ်ပါသလား။ ငါလုပ်သင့်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ... ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကနေ့ကဘယ်တော့မှမလာဘူး။ ဒီ infernal loop မှထွက်ပေါက်ထွက်ပေါက်ရှိပါသလား ???
hard drive ကိုဖျက်ပစ်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ
ရီကာဒို Fabian ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် El Capitan ကိုထည့်သွင်းပြီးသောအခါပြproblemsနာအချို့ရှိပါသည်
1.- ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား AutoCAD ကိုဖွင့်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းကိုပြုလုပ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်လျှင်မြန်စွာပိတ်ပါသည်။ Yosmite နဲ့လည်းအတူတူပါပဲ၊ ငါ Mavericks ကိုပြန်ခဲ့ရတယ်။
၂.- မက်စ်ကိုအလုပ်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်သည် boot စခန်းကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်ကီးဘုတ်ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အသိအမှတ်မပြုပါ။
ငါ့မှာ ၂၇″ iMac ကွန်ပျူတာရှိတယ်
Ricardo Fabian ကိုပြန်ပြောပါ
ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်မယ် ... ဒါက system error ဖြစ်ရမယ်။ ဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
သငျသညျငါလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရွေးချယ်စရာ, မျက်နှာပြင်ကီးဘုတ်, နှင့်မောက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သကဲ့သို့သင်တို့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရန် ...
ဝီလျံ rodriguez Martinez ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်း၊ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ သင်ကီးဘုတ်အမှားကိုတွေ့ပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်လို့ငါ windows boot ပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး
guillermo rodriguez martinez အားပြန်ပြောပါ
Angel Romero ဟုသူကပြောသည်
Ángel Romero အားပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်တွင် ZTE နှင့် Huawei ရှိသည့် modem များ (BAM)၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ Manual connection ကိုတောင်မှကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ !!
ချစ်ခင်ရပါသော၊ သင် Huawei BAM ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့တာလား။ မင်္ဂလာပါ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် El Capi ကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီး operating system ကိုဖွင့်သောအခါ၊ JAVA ကို update လုပ်ရမည်ဟုပြတင်းပေါက်အနည်းငယ်ပေါ်လာသည်။ ငါ "နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ" တွင်ပြသသောလိပ်စာသို့သွား။ ဘာမျှမဖြစ်ပျက်။ အဆိုပါနှောင့်အယှက်ပြတင်းပေါက်ပေါ်လာတဲ့စောင့်ရှောက်။ မည်သူမဆိုဘာလုပ်ရမည်ကိုသိလျှင်၊
မင်္ဂလာပါ။ Safari ကိုလုံးဝအေးခဲအောင်မလုပ်မှီကျွန်ုပ်လည်းထိုပြသနာကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။ java ၀ င်းဒိုးဆွဲထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ် ထပ်မံ၍ ဝင်ခွင့်မရှိပါ။ အကယ်၍ သင်ဤပြproblemနာကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါကသင်သည် CleanMyMac3ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် .. သင်၏ mac malware များကိုမည်သို့သန့်ရှင်းရမည်နည်း။ Safari ကို restart လုပ်ပါ။ ခွင့်ပြုချက်များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပါ။ Youtube တွင်သင်ခန်းစာများနှင့်၎င်းသည် El Capitan "eye" နှုတ်ခွန်းဆက်ချက်များအတွက်မည်သို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရမည်နည်း။ အဲဒါကိုသုံးပြီးတဲ့နောက်ငါစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ Java ၀ င်းဒိုးပုံကိုရပ်လိုက်သည်။ ..
Capitan သို့မွမ်းမံသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ pop3 အီးမေးလ်အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တွင်မှတ်ပုံတင်။ မရပါ
Mac ,,, က pop server ကို3မတှေ့နိုငျကပြောပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်စာကိုပို့သော်လည်းမရရှိပါကတစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားကူညီရန်တောင်းဆိုသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းထားသောပြaနာရှိနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်ယခင်က၎င်းကိုစတင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်ကခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဆက်လက် download မလုပ်နိုင်တော့ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အတူတူပါပဲ ဒါကိုဖြေရှင်းလို့ရမလား။
သပြေ Montserrat ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို! မင်းကိုငါမေးချင်ခဲ့တယ်၊ ငါချက်ချင်းမွမ်းမံလိုတာကိုအရမ်းသဘောကျတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါငါ့သခင်စာတမ်းကိုလုပ်နေတယ်။ တစ်ခုခုမှားသွားမှာကိုငါကြောက်တယ်။ တကယ်တော့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူမရဲ့ Motherboard ကိုနောက်ဆုံးမွမ်းမံမှုမှာမီးရှို့တယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုငါသိချင်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျွန်ုပ် Mac ကို ၀ ယ်ပြီး PC ဗလာဖြင့် update ကိုလုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်မလုပ်မီကျွန်ုပ်တစ်ခုခုလုပ်သင့်လားဟုသင့်အားမေးသည်။
Montserrat Eugenia အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ယခု Captain ကိုမွမ်းမံရန်အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းအမှားများမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ရန်အတွက်ခြစ်ရာမှတပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုလိုအပ်သည်။ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းအရင်းမှာသင်၏ mac သည်အေးခဲသွားပြီးဗလာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏အရေးကြီးအချက်အလက်များကိုပြင်ပ drive တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းပါ။ အကြံပြုလိုသည့်ပရိုဂရမ်များကိုမေ့သွားပါ။ ထိုအရာကို Captain ထဲမှပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ။ ပြီးလျှင် Mac ကို format လုပ်ပြီးလုပ်ပါ။ Captain ... အတွေ့အကြုံကနေပြောရမယ်၊ Mac ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံအကြောင်းကျွန်တော်မလေ့လာခင်အထိအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကပ္ပတိန်ကအရမ်းအလုပ်လုပ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ကောင်းစွာနှင့်အလွန်ကောင်းလှ၏။
ငါ Mac Book Air ကို Captain ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်ကြောက်လန့်စရာတွေအားလုံးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ .. ဒါ့အပြင်ချိတ်ဆွဲထားတာကြောင့် ၃ ရက်လောက်ကြာမယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတယ်။ ဒါကအရင် update နဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး Apple သည်လိုအပ်သောချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ပြီး El Capitan operating system သစ်ကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းသည်လုံခြုံမှုနှင့်မြန်ဆန်ကြောင်းပြောကြားသည်အထိကျွန်ုပ် Yosemite နှင့်အတူရှိနေသည်။ ၎င်းသည်ကပ္ပတိန်တွင်ဘာမျှမရှိချေ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ Imac OX10.6.8 ရှိပြီး El Capitan ကိုကျွန်ုပ်မ download နိုင်ပါ။ ကူညီကြပါ
ဟေ့မက်စ်၊ ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်မယ်၊ Cap ကိုငါ download လုပ်လို့မရဘူး၊ သင်ရပြီလား?
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ 2010g i5 macbook pro ကို 4g ram ပါရှိပါတယ်။ ဒီ operating system ကို update လုပ်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ လောလောဆယ် mavericks နဲ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ မှတ်ချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မွမ်းမံခြင်းအကြောင်းကိုပင်မစဉ်းစားပါနှင့်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်ဒါက operating system ကိုဘေးဥပဒ်ပါပဲ။ အဓိကအချက်မှာ - အကယ်၍ သင့်အတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါက၎င်းကိုထားခဲ့ပါ။ Lion နဲ့အတူကျွန်တော့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ အဲဘေးကစုစုပေါင်းဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ El Capitan ကို update မွမ်းမံခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ App Store နဲ့မဆက်သွယ်ဘူး၊ နှစ်ပေါင်းများစွာပြန်လည်စတင်ဖို့၊ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမပိတ်နိုင်ဘူး၊ ငါဖွင့်ရမယ်။ ကိုယ်တိုင်အားပိတ်ထားလျှင်၊ ဘက်ထရီသည်အခြားနာရီအနည်းငယ်အတွင်း ၂ နာရီအတွင်းအစာစားသည်။
မင်္ဂလာပါမက် ငါသည်လည်းသုံးရက်အကြာတိုင်အောင် OSX 10.6.8 ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ iMac 21.5 and ရှိပြီးကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုထည့်သွင်းစရာမလိုဘဲ၎င်းကို download ပြုလုပ်၍ ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ Master Card မှ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အနေဖြင့်၎င်းကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်ပြီးအနည်းဆုံးယခုအချိန်အထိ El Capi သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော် iPhoto ကိုယခုအခါ Photos ဟုခေါ်သည်၊ ထိုလျှောက်လွှာတွင်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ဂီတကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်း။ မရပါ။ ဒါပေမယ့် iTunes library မှသီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးအတွက်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကအမြဲတမ်းအတူတူပဲ။
ကျွန်ုပ်သည်လျှောက်လွှာအားလုံးကိုမစမ်းသပ်ရသေးသော်လည်း "brujulele" ကို သုံး၍ ၎င်း၊ ဒီဗီဒီ၊ USB၊
ငါမွမ်းမံရုံတင်မကဘူး၊ ဒါကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ၊ ငါအနီးစပ်ဆုံးညမှာ ၈ နာရီအတွင်း download လုပ်ခဲ့တယ်။ install ကိုတစ်နာရီလောက်ယူပြီး reboot လုပ်တယ်။ ချိတ်ထားရင် partitions (သို့) backup တွေမရှိဘူး။ အခုငါလုပ်နေတာက Disk Utilities နဲ့ partition လုပ်ပြီးစမ်းသပ်ဖို့ပြန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်တာတစ်ခုတည်း။ ငါ့အ OS X ကို 8
ဒီနေ့ "El Capitan" ကို update လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့မေးလ်ထဲမှာ "inbox" ထဲရှိကျွန်ုပ်၏စာများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ရယူရန်နည်းလမ်းရှာမတွေ့ပါ။ ဒီထက်ပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မလားမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်အခုငါမြင်နေတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်မှာစာတွေအဖြေမရသေးဘူး၊ အခုသူတို့ကမဟုတ်ဘူး။
ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့ "Mailbox Menu" ကိုဖွင့်ပြီး "Rebuild" ကိုနှိပ်ပါ။ ပျောက်သွားတဲ့ inbox ထဲမှာရှိတဲ့ message အားလုံးပေါ်လာတယ်။
ငါပဲပို့ပြီးမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ စာမပို့ပါ
Jaqueline estrada ဟုသူကပြောသည်
Capitan မှအဆင့်မြှင့်။ သူက yosemit ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသူ့ကိုတပ်ဆင်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူကကျွန်တော့်ရဲ့ icloudd ဒေတာနဲ့အမှားအမှတ်အသားကိုတောင်းတယ်။ ဒီဟာရပ်သွားတယ် ငါကပိတ်ထားခြင်းနှင့်နောက်တဖန်စတင်ခဲ့သည်။ ပန်းသီးလိုဂိုသာပေါ်လာမည် ငါလုံခြုံ mode သို့ boot ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါ့ကိုခွင့်ပြုမထားဘူး
Jaqueline Estrada အားပြန်ကြားပါ
ငါဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ, ငါ autodesk မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သော beta ကိုသွင်းထားရတယ်, ပြီးတော့ El Capitan နှင့်အတူသဟဇာတတရားဝင်ဗားရှင်း 2016 ထွက်လာမှစောင့်ဆိုင်းရန်။ မင်းစိတ် ၀ င်စားရင်မင်းကိုငါထားခဲ့မယ်
ငါ mac..pasaorn ကိုနာရီအတော်ကြာ update လုပ်တယ်။ အဲဒါက update မပြီးသေးဘူး။ နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ pilladisimo ပါ။ ပိတ်ထားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်ပေါ်လာတဲ့မျက်နှာပြင်အတိုင်းပြန်ပေါ်လာရင်တစ်ယောက်ယောက်သိရင် ဒါကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ။ Apple ရဲ့လိမ်လည်မှုကိုဒီ "အရည်အသွေး" ရှိကွန်ပျူတာနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် El Capitan ကို update လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ hotmail (outlook.es) တွင်ပြသနာများရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ tray မှသတင်းစကားများထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ မည်သူ့ကိုမှ၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိသလား။ ကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုရရှိသည်။ ဆာဗာကိုရှာမတွေ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်အတူတူပါပဲ၊ Hotmail အကောင့်ကကျွန်ုပ်အားမေးလ်တွင်အမှားတစ်ခုပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစကားဝှက်ကိုအဆက်မပြတ်တောင်းသော်လည်း ၄ င်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်ဝဗ်သို့တိုက်ရိုက်သွားသောကြောင့်မှန်ကန်သည်။ ) အခြားအကောင့်များအတွက်လည်းကျွန်ုပ်ကိုပို့ခွင့်မပြုပါ။ မည်သူမဆိုဒီအကြောင်းကိုဘာမှသိ ?? ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် Captain သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါသည်။ iMac 21 ′corei5 နှင့် 8 ထဲတွင်သိုးပါသောတိုးတက်မှုများမတွေ့ပါ။ startup အချိန်နှင့် apps များဖွင့်ချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပရင်တာနှင့်ပင်လယ်ကူးစက်တစ်ခုကိုအသိအမှတ်မပြုခြင်း၏ပြskနာကိုကျော်သွားသည်။ သူတို့က update လုပ်ထားတဲ့ driver တွေထုတ်ကြပေမယ့် hdd ကိုထုတ်ပစ်ခွင့်မရှိဘူး။ ငါအလျင်အမြန်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ရှိရာ Yosemite သို့အလျင်အမြန်ပြန်သွား၏။ ဒီတစ်ခါလည်းမွမ်းမံမှုများသည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါ၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်သည်။
မည်သူမဆို SD ကဒ်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလား။ ကျွန်ုပ်ထံတွင် SD မှဓာတ်ပုံများကိုမည်သို့ကယ်တင်ရမည်နည်း၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်သည်၊ ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ၊ Time Mac တွင်ကျွန်ုပ်၏ Macbook pro ကို backup မလိုဘဲ update လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ဘယ်လိုပြန်သွားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ငါအရမ်းအပူတပြင်းရှိတယ်။ ငါ့ကိုပြောတဲ့လမ်းကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုရင် '((
Time Machine မှအရန်ကူးယူထားသော backup မရှိလျှင်အထက်ပါအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းကခေတ်မီတယ်၊ MacBook ကိုသင်ပြန်မတင်လျှင်သင်၌ရှိသောဖိုင်များကိုမဖျက်မိသောကြောင့်သင်ဘာမှမဆုံးရှုံးပါ။
ဗစ်တာ mathews ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် os ကိုမွမ်းမံနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားအသက်သွင်းခွင့်မပြုစေခြင်း၊ ဖျက်ပစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Victor Mathews အားပြန်ပြောပါ
သူဘယ်မှာခေတ္တရပ်ဆိုင်းခဲ့တာလဲ download လုပ်လား တပ်ဆင်မလား
ပထမဆုံးပြproblemsနာများ, avertv ကို 64 bit mode ဖြင့်မထောက်ပံ့ပါ။
မင်းကွန်ပျူတာကွန်ပျူတာလောကမှာမင်းဘယ်လောက်ကြာကြာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ဒီ OS ဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအက်ပဲကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားယခင် OS မှအသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုထားခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။ အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးနောက်၎င်းသည်သင့်အားတစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခု၊ သော့ခတ်ထားသောကွန်ပျူတာနှင့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမျှမထားဘဲထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်?
PUFFFGF ... ငါ update ကို install လုပ်သည်ကိုကြည့်ကြပါစို့၊ ကျွန်ုပ်သည်အနည်းငယ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သတင်းများကိုကြည့်ရှုမည်၊ appestore မှ app ကို update ပေးပါမည်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်အား၎င်းကိုပိတ်ထားပါ၊ ၎င်းကိုထပ်မံဖွင့်ပါ၊ မစတော့ပါ။ က status bar နှင့်ဘာမျှနှင့်အတူပန်းသီး၌မှီဝဲတယ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်မိတ္တူကူးမထားဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကငါကပြင်ပ disk ထဲမှာရှိနေပေမယ့် NOW ကဘာလုပ်ရမလဲ။ အချို့သောဖြေရှင်းနည်းတွေရှိတယ် ... ငါ့ကိုမွမ်းမံဖို့ပို့ပေးမယ့်သူ ... အဲဒီမှာအကူအညီအနည်းငယ်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ Sara! ဒါဟာငါနဲ့တူတူပဲ။ ကျွန်ုပ်လွယ်ကူသောပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းလည်းရှိသည်။ လုပ်ပါ
၎င်းကိုဖွင့်ပါ။ ပန်းသီးပုံမပေါ်မီ Alt ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ။ ၎င်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကိုပေးလိမ့်မည် (ထွက်ပေါ်လာသည့် flexita ပေါ်ရှိ mouse ကိုနှိပ်ပါ) hard disk ၏မှတ်ဉာဏ်ထဲရောက်သွားပြီးအချက်အလက်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ ကသယ်ဆောင်လာသည်။ သင် osx twndra q ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအကြား ၂ နာရီခန့်ကြာလိမ့်မည်။ Ami ကဒါကိုကျွန်တော်လုံးဝမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ dosco ကိုအထက်ကဖယ်ရှားလိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ update ကိုကောင်းကောင်းလက်မခံဘူးလို့ထင်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူကကြိုးစားပြီးမင်းအတွက်အလုပ်လုပ်သင့်တယ်။ ငါဒီနေ့ပြုပြင်လိုက်ပြီအခုငါကောင်းပြီ
အရမ်းဆိုးတာကိုရေးတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး ... ဒါကငါ့လက်ကိုင်ဖုန်းရဲ့ touch screen ဖြစ်ပြီးလက်ချောင်းတွေကအရမ်းကြီးမားတယ်
ဟိုင်းအီဗန်၊ ကျွန်ုပ်သည် Sara သို့သင်၏အဖြေကိုဖတ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ရက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်အားရွေးချယ်ခွင့်ပေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်စနစ်သို့ကျွန်ုပ်၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကုဒ်ကိုတောင်း။ ၎င်းကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အိုင်ဗင်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ 700G မှာ hard drive နေရာမရှိဘူး၊ အဲဒါကအာကာသပြproblemနာလို့မထင်ဘူး။ ငါဒါကိုစက်ဝိုင်းတွေပေးလိုက်ပြီဒီနေ့ငါမကြိုးစားတော့ဘူး၊ နောက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရှာမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ငါရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ငါဟာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Sara သင်သည်အခြားသူများနှင့်ထပ်တူအမှားတစ်ခုကိုစားနေသည်။ သင်ကပ္ပတိန်ကိုသင်၏ yosemite (သို့) mavericks သို့မဟုတ်နှာခေါင်း) ကို update လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ဂျင်းဘောင်းဘီအောက်ရှိဝတ်စုံနှင့်ဆင်တူသည်။ ဆိုလိုသည်မှာထိုသို့မဟုတ်ပါ။ သင်တပ်ဆင်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်သင်၏အချိန်စက်ကိုသွင်းသောအခါအချို့ပရိုဂရမ်များမှအမှားအယွင်းများရလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ထို့နောက်စကတ်ကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပါ။ ပြန်လည်ပြုပြင်မှုပုံစံပြုပါ။ သင်၏ mac သည်သင်ကိုယ်တိုင် command + R မှလွယ်ကူသည်။ ထို့နောက် reinstall option သို့သွားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည် crashes မတပ်ဆင်မီနောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ခြစ်ရာ မှစတင်၍ အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးသင်၏ပရိုဂရမ်များ၌အချိန်စက်ကိုသင်မေ့သွားလျှင်၎င်းသည်ကပ္ပတိန်အတွက်မဟုတ်ဘဲယခင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင်ပြန်လည်ဆယ်တင်ရန်စီစဉ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သင့်အပလီကေးရှင်းများကို tb မှစတင်တပ်ဆင်ပါ။ သို့မှသာသင်ကပ္ပတိန်၏စွမ်းအားအမှန်ကိုခံစားရလိမ့်မည်။ အဲဒါကောင်းတယ်။ မင်္ဂလာပါ။
ငါမှာ 200gb ထက်ပိုတယ်၊ ပြproblemနာကမှတ်ဉာဏ်မဟုတ်ဘူး၊ ငါကလက်ရှိဖိုင်တွေကို overwrite လုပ်ရတာထက်ပိုတယ်ထင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ update ကအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မလာဘူး၊ သက်သေပြလို့မရဘူး၊ ဘာမှမဆုံးရှုံးနိုင်ဘူး။ သင်သာပိုကောင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိုင်ဗန်၊ မနက်ဖြန်ကြိုးစားမယ်။ ငါဘာမှမဖြုန်းတီး (အချိန်ပဲ) ဒါကြောင့်ကံရှိလားဆိုတာကြည့်ရအောင်
သင် update လုပ်သည့်အခါနှင့်သန့်ရှင်းစွာတပ်ဆင်ထားသည့်အချိန်၌ပင်ဖြစ်ပွားသောဘေးအန္တရာယ်အားလုံးကိုဖတ်ရှုပြီးနောက် Jordi Giménezထင်မြင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်သိချင်ပါသည်။ အက်ပဲလ်အယ်လ် Capitan ဟာအကောင်းဆုံးလို့မွမ်းမံမှုပြုလိမ့်မယ်လို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ရေးသားဖို့အတွက် Apple ကသင့်ကိုပေးရလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်သည် Macbook Pro တွင်ရှိသော bug များကို Apple မှဖြေရှင်းရန်စောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။
၁- မိနစ်ခန့်ကန ဦး စတင်ခြင်းသည် ၃ မိနစ်ခန့်
၃။ Adobe suite app များသည်အလုပ်မလုပ်ပါ
၆။ ဘက်ထရီသည် ၆ နာရီခွဲမှ ၂း၄၀ နာရီသာသွားပြီး Safari တွင်သာရွက်လွှင့်သည်
ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းဒီဖိုရမ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီး၊ အက်ပဲလ်အက်စ်အက်စ်ဖိုရမ်ကိုဘယ်သူဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်တယ်။ အခုထိဘာမှမရှိဘူး။
တစ်စုံတစ် ဦး သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ပြsomeoneနာရှိပါကမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲသူများ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့် Soy de Mac ၏အယ်ဒီတာများထံကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ကြိုးစားသည်။
များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသောဆောင်းပါးများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီး OS X El Capitan သည်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုပြုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဖြစ်ကြောင်းငါပြောနိုင်သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့လူတိုင်းမပျော်နိုင်ဘူး၊ အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ကြဘူး။ တစ်ခုခုမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာငါတို့ကိုကူညီပေးနေတာပဲ။
Adobe မှလွဲ၍ သင်လုပ်သောအချက်များသည် El Capitan သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည့်အရာများဖြစ်သည့်အတွက် Adobe မှလွဲ၍ အလွန်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများဖြစ်သည်။
ဗားရှင်း ၁၀.၁၁.၁ အသစ်ဖြင့်သူတို့သည်ဤဗားရှင်း၏ပြproblemsနာအချို့ကိုဖြေရှင်းပြီးသင်၏ MacBook ၏ပြbနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မားကို့စ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ချပ်ချပ်ချပ်ချပေးပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်ပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကပ္ပတိန်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခွင့်ပြုသည့်အခါကောင်းပြီ၊ အဆင်ပြေပါသည်။ အံ့သြစရာကောင်းသည်၊ appstore ကကျွန်ုပ်အားအမှားတစ်ခုစတင်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဘာမှမလုပ်နိူင်ပါ။ ငါနောက်ဆုံးမှာတော့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးသူတို့ဆာဗာတွေကျဆင်းသွားပြီ၊ ဒါကပြtheနာဖြစ်တယ်၊ ငါ့ကိုပေးတဲ့အဖြေကမှန်တယ်ဆိုတာပြောတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကသင့်ကိုဒီလူတွေဆီကနေသတင်းပို့လို့ရမယ်လို့ပြောရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြgiveနာတွေကို q နဲ့ပေးမယ်။ သူတို့ကကြိုတင်စီစဉ်ထားဖို့အကြံပေးချင်တယ်။ ငါတို့တွေအများကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။
ငါ့ကိုအကူအညီပေးတဲ့အတွက်အိုင်ဗင်နဲ့မားကို့စ်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီညငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့အ imac နောက်တဖန်ရှိနိုင်သည်ကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ၊ ၂၁ IMac ၏ El Capitan, မွမ်းမံသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်အား ဆက်၍ အမှားပြုမိသည်။ ဒါပေမယ့်အဆိုးဆုံးကတော့မှော် mouse ၏ဘယ်ခလုတ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တချို့အကူအညီလား
မောက်စ်ကို၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်မလား၊ မသိသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်အခြား Mac တစ်ခုတွင်သင်စမ်းကြည့်ပါကအမှားနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘာအမှားကိုပေးသနည်း။
Juan မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနံနက်ခင်းဂျိုဒီ! မနေ့ကငါ SSD အသစ်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပြီး USB OS X El Capitan မှတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါ၌ပထမနှင့်လေးနက်သောပြproblemနာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Roland Octa ဖမ်းယူအသံကဒ်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒရိုင်ဘာများအားအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ် Mavericks မှလာသည်။ ကဒ်« USB On Line »ယခုတွင်၎င်းသည်ဘာမှမထည့်ပါ။ အသံ ဦး စားပေးချက်များတွင်၎င်းကိုမသိရှိပါ။ ငါကဖယ်ရှားသည့်အခါက USB OFF LINE ကိုညွှန်ပြလျှင်နှင့် system ကိုအစီရင်ခံစာထဲမှာကဒ်မှတ်သားပေမယ့်အသိအမှတ်ပြုမထားဘူး ... ငါ OSX ၏ကောင်းမွန်သောအထင်အမြင်ရှိသည်။ ကပ္ပတိန် Mavericks ကိုပြန်သွားစရာမလိုပါ ... သင်၏အဖြေ Jordi! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Juan Essential ကိုပြန်ကြားပါ
ငါ့မှာဘက်ထရီပြproblemsနာရှိတယ်၊ Mavericks နဲ့အတူ ၆ နာရီနီးပါးလောက် ၂ နာရီသာခံတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီ operating system နဲ့ဘက်ထရီကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Macbook pro2c ကဲ့သို့အရူးကဲ့သို့အသုံးပြုသည်။ ငါ Mavericks ရှိတယ်။ Yosemite ကိုတစ်ခါမှမတပ်ခဲ့ဘူး၊
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာနှေးနေပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ရုံးလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများတွင်ပြwithနာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Word သို့မဟုတ် Power Point တစ်ခုတည်းကိုသတိပေးခြင်းမရှိဘဲမကြာခဏပိတ်လေ့ရှိသည်။
ငါကစသုံးပြီးပြproblemsနာတွေကအနည်းဆုံး ၃ မိနစ်လောက်ကြာတယ်၊ ငါ Mavericks ကိုဘယ်လိုပြန်သွားမလဲ။
မင်္ဂလာပါ။ Mac အသစ်များအတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိလို့ဝမ်းသာပါတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်၏ mac air တွင် el capitan ကို install လုပ်ခဲ့ပြီး mail ကစာပို့ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကို output folder ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့သည်။ သူကသူမမသိတဲ့စကားဝှက်ကိုတောင်းပြီး "Mc Mail error domain 1032" ကိုလည်းပြောတယ်။ Iphoto လည်းငါ့ကိုပိတ်ဆို့ထားပါတယ် မရရှိနိုင်ဖြစ်ထွက်လှည့်ထားတဲ့ update ကိုအဘို့ငါ့ကိုတောင်း !!!! မေးလ်ကိုဘယ်လိုပြန်ယူနိုင်မလဲ။ အမှန်တရားကတော့ဒီဟာကပိုမြန်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိမပြုမိ
နောက်ထပ်မေးမြန်းချက်တစ်ခု - သင်သည် operating system ဟောင်းကိုဘယ်လိုဖျက်သလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော့်မေးလ်ကစာတွေမပို့ပါဘူး သူတို့ကို output ဖိုင်တွဲထဲပို့လိုက်တယ်။ ငါဒါကိုပြင်ဖို့တစ်ခုခုလုပ်လို့ရလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါ့ကိုပြသတဲ့တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာက Apple Store နဲ့ပါ။ ပရိုဂရမ်တော်တော်များများကစာတွေအနီရောင်နဲ့ "Error installing" ပို့ပေးတယ်။ အဲ့ဒီပြproblemနာကိုရှောင်နိုင်အောင်ငါထပ်မံတပ်ဆင်ရမယ်။ ဒါကတခြားသူတစ်ယောက်ကိုဖြစ်သွားတယ်။ အဖြေ
Ronak nakamura ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိ yosemite (အမှိုက်သရိုက်ဘယ်လောက်နှေးနေသည်) ကောင်းသောမနက်ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်များအားလုံးကိုအရန်ကူးရန်လိုသည့်ကပ္ပတိန်ကိုမွမ်းမံလိုလျှင်သိလိုပါသလား။
ronak nakamura သို့ပြန်သွားရန်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကပ္ပတိန်ကိုထည့်ပါ။ အမှန်တရားကတော့ imac အရမ်းနှေးနေတယ်။ ငါ mavericks ကိုဘယ်လိုပြန်သွားမလဲ။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်ကပ္ပတိန်ကိုသာတပ်ဆင်လိုက်ပြီးယခုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသူနှင့် user ည့်သည်သုံးစွဲသူများရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်သတ္တုတွင်းကိုနှိပ်သောအခါကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုထည့်လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည်စတင်ဖွင့်သည်နှင့်ပြန်လည်စတင်သည်၊ ငါ့ထံသို့, မဝင်နိုင်ဖြစ်ခြင်း။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ OS X 10.6.8 မှ OS X 10.11 (El Capitan ကို accent မရှိ) ကို 2009 သွားပြီးသန့်ရှင်းတဲ့ installation မရှိပဲသန့်ရှင်းတဲ့ installation မရှိပဲ ၀ င်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်ဝန်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်ဖတ်နေသည့်ပြofနာများ (ယခု) ကျွန်ုပ်တွင်မရှိသေးပါ။ ဖိုရမ် iPhoto ကဲ့သို့ Photos App သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်သည်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်တေးဂီတကိုမတူကွဲပြားစွာစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲခွင့်မပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ iTunes စာကြည့်တိုက်ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုသော်လည်းအချို့သောသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုသို့သတ်မှတ်သောအခါ၎င်းသည်ကျန်အပိုင်းများ၌လည်းတွေ့နိုင်ပြီး၎င်းသည်ပရောဂျက်ရှိဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီ၏ကြီးမားသောပြသမှုအချိန် (ဆလိုက်ရှိုး) ကိုသတ်မှတ်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ Apple က iPhoto version အသစ်ထုတ်မလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံး download လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာ OS X L Capitan ကို OS X Lion မှအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်ဘက်ထရီပြတ်တောက်ခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းသို့အမှားအယွင်းများကြုံတွေ့ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်မျက်နှာပြင်တုန်ခါခြင်းတို့ဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးသောအခါ၊ ငါခြစ်ရာကနေ install လုပ်ရန်၊ ဖိုင်ကိုအရံသိမ်း။ Macbook ကိုပြန်စတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် pro၊ disk အခန်းကန့်ကိုဖယ်ရှားပြီး web မှ OS X ကိုထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်သည်။ အစပိုင်းမှာတော့သူကခန့်မှန်းခြေ ၈-၁၂ နာရီလောက်ကြာတယ် (ငါထင်တာကတော့ဗင်နီဇွဲလားမှာစိတ်ဆင်းရဲစရာ bandwidth ရှိနေလို့ပါ) ဒါကြောင့်ငါ install လုပ်တာကိုရပ်လိုက်တယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့အိမ်ကိုဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်။
မင်္ဂလာပါ Pedro! မင်းဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တာလဲ
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုလွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသောတစ်ခုတည်းသောပြသနာမှာ ၈ နာရီမှ ၉ နာရီထိ ၆ နာရီမှ ၆ နာရီအထိကြာသောဘက်ထရီဖြစ်သည်။ ငါပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုကိုတွေ့ပြီလားငါစိတ်ဝင်စားတယ်။
Pedro G ဟုသူကပြောသည်
El Capitan နဲ့အတူကွန်ပျူတာကိုယခုဖွင့်တိုင်း cursor ကိုရွှေ့ပါ။ color palette ပေါ်လာပြီးအေးခဲသွားတယ်။ menu ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အေးခဲသွားတယ်၊ ငါ့ကို dock မပြတော့ဘူး၊ ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး။
ကူညီကြပါ !!!! ကျေးဇူးပြု
Pedro G ကိုပြန်ပြောပါ
ကျွန်ုပ်သည် Capital သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ icloud အကောင့်သည်ကျွန်ုပ်၌ရှိသောလျှို့ဝှက်နံပါတ်ကိုမသိရှိပါ၊ အခြားစက်ပစ္စည်းများ (iphone, ipad) နှင့်၎င်းမှာအဆင်ပြေပါတယ်။ ပြီးတော့၊ icloud ကိုကျွန်တော်မသုံးတဲ့အတွက်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ပြက္ခဒိန်၊ မှတ်စုများစသဖြင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်လို့မရပါဘူး။
ငါပြောဖို့မေ့သွားတယ်: ငါစကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ, ငါ့ကိုငါ့ကို El Capitan တပ်ဆင်ထားရှိရာ Imac အပေါ်မဟုတ်ဘဲအခြား devices များပေါ်တွင်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။
မည်သူမဆို၎င်းကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုသိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ..help
မင်္ဂလာပါ FRFOTO သင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ် ??? ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာ iCloud နဲ့ပြproblemနာရှိနေတာပဲ။
Olga ငါ FRFOTO သည် iCloud တွင်အသုံးပြုသူစကားဝှက်နှင့်အတူပြproblemနာမရှိပါ။ System preferences မှသင်လုပ်ဆောင်ရမည့် iCloud ဖြစ်သည်။
Marcello dionisi ဟုသူကပြောသည်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် El Capitan ကို install လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ GMAIL အီးမေးလ်များကိုယခုလ ၁ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိကွန်ပြူတာနှင့် GMAIL တွင်ဖျက်လိုက်ပြီးပြန်လည်ရယူရန်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Marcello Dionisi အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ။ အားလုံးကူညီနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ။ ငါမှာ imac ရှိတယ်၊ Captain ကိုငါ update လုပ်ခဲ့တယ်။ ငါပြသနာကငါမရှိတော့တဲ့မှတ်စုတွေဟာအရင်စနစ်မှာလက်ချောင်းသုံးချောင်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့သွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်စုများ၊ ပြက္ခဒိန်နာရီစသည်တို့ရှိသည့်စာမျက်နှာ၊ သို့သော်စနစ်ကိုအသစ်ပြောင်းသည့်အခါ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်မရှိတော့ပါ၊ ၎င်းတွင်ရှိသည့်မှတ်စုများလည်းမရှိပါ။
ကျွန်တော့်မှာ El Capitan ထည့်သွင်းနေတဲ့လေးနက်တဲ့ပြproblemနာရှိနေပါတယ် ကျွန်ုပ်တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အစောပိုင်း မှစ၍ ၁၅″ Macbook Pro ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် osx ကိုခြစ်ရာမှတပ်ဆင်ရန်လုံးဝကြိုးစားနေသည်။ ငါ USB နှင့်အင်တာနက်မှ (Command + R ဖြင့် booting) လုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်ဖြစ်ပျက်မှုသည်ပြီးပြည့်စုံသောတပ်ဆင်မှုပြီးဆုံးသွားသော်လည်းပထမ ဦး ဆုံးပြန်လည်စတင်ပြီးသည့်နောက်တွင်မျက်နှာပြင်မှာကွက်လပ်ဖြစ်နေပြီးထိုနေရာမှမသွားပါ။ ငါ့ကိုသံသယဖြစ်စေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကငါ့ disk ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်မှာ superdrive နဲ့ HDD အစား install လုပ်ထားတဲ့ SSD ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် Mavericks နဲ့ Yosemite တို့မှာရှိပြီးသားပဲ။ အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Outlook နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရာဟာတည့်မတ်ပေးလိမ့်မယ်။ Outlook ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အခါဒီအဖြေကပူးတွဲဖိုင် (HTML သို့ RFT) မပေါ်လာဘူးဆိုတာ ???
Rolando Sanchez ကိုပြန်ကြားပါ
လွန်ခဲ့သော ၂ နာရီကျော်ကတည်းက Capitan ၏တပ်ဆင်မှုကိုယခင်က Yosemite ရှိခဲ့ပြီးစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တပ်ဆင်မှုတိုးတက်မှုဘားသည် ၂ နာရီနီးပါးကြာမြင့်သောနောက်ဆုံးလမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်။ ငါဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုလမ်းပြပေးနိုင်မလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Charly မြစ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Captain ကိုသာ install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် Photos application နှင့်ပတ်သက်ပြီးပြhaveနာတစ်ခုရှိပါသည်။ ၎င်းသည်စာကြည့်တိုက်ကိုစတင် update လုပ်ပြီး၎င်းသည်မမျှော်လင့်သော error message ပေါ်လာပါက application ကိုပိတ်ပြီးထပ်မံကြိုးစားပါ။ ငါအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့နှင့်အမြဲတမ်းအတူတူပင်။ ၎င်းကို ပြန်လည်၍ မရပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ ငါ့မှာ ၇ နှစ်အရွယ် iMac ရှိတယ်
Charly River အားပြန်ကြားပါ
ဟိုဆေးအမ် Prera ​​Gonzalez ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် El Capitan ကို install လုပ်ပြီးပါပြီ။ utorrent နှင့် Ccleaner သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားမည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုပြောပြနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jose M. Prera ​​Gonzalez အားပြန်ပြောပါ
မာရီယာ g သတာ Salgado Mejia ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ MacBook Pro ကို operating system အသစ်ဖြင့် update လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားကူညီရန်တစ်စုံတစ် ဦး လိုအပ်ပါသည်။ ဂဏန်းတွက်စက်၊ ရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ desktop များကိုရှာဖွေပြီးမှတ်စုများ၊ သတိပေးချက်များနှင့်ဂိမ်းပဟေsameိတစ်ခုတည်းထပ်တူပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာပါ ၀ င်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာမှရှာမရနိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်တော့်ကိုအရေးကြီးသောမှတ်စုများရှိသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်မည်သို့ရှာတွေ့နိုင်သည်ကိုပြောပြပါ။
María Esther Salgado Mejíaအားတုံ့ပြန်ပါ
Fabian ဂျီ ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်း၊ ကျွန်ုပ်မှာ OS X Captain at update ကိုငြိမ်သက်စွာမွမ်းမံခြင်းဖြင့်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။ ပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာပါဝါဖြတ်ခြင်းနှင့်သုညမှဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် အသင်းရှုံးနိမ့်နိုင်သည့်အတွက်ကြီးမားသောပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်သည်
Fabian G. အားစာပြန်ခြင်း
ကာရိုလိုင်းနား Alfaro ဟုသူကပြောသည်
ငါ os x capitan ကို download လုပ်ခဲ့ပြီး၊ mac သည်တပ်ဆင်ပြီးပါက၊ delete utility ကိုဖွင့ ်၍ os x yosemite ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရသည်။
ဒါဟာအရမ်းဆိုးတဲ့အတွေ့အကြုံပဲ .. အခုငါထပ်မံကြိုးစားရန်ပင်ကြောက်နေတယ်
Carolina Alfaro အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို! ၎င်းသည်တပ်ဆင်မှုကြောင့်လားမသိပါ။ သို့သော်၎င်းကိုဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်သည်ပါဝါခလုတ်ကို နှိပ်၍ စတင်ရန်လိုအပ်သည်၊ မဟုတ်ပါက၎င်းသည်ပန်ကာသည်အမြဲတမ်းကစားနေသည်။ အမိန့်များနှင့်အခြားအရာများအားလုံးသည်လုပ်ပြီးပြီ ဖြစ်၍ သူတို့က Apple ၏လက်ငင်းစာတိုပေးပို့စနစ်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီသည်။ သို့သော်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမည်သူကသိသနည်း။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ၂၀″ imac ၌ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးပရိုဂရမ်အားလုံးတွင်ရလဒ်သည်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ကွန်ပျူတာအဟောင်းတွေအတွက်ငါ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြတယ် Mavericks ကနေ Yosemite ကိုပြောင်းတဲ့အခါငါအရမ်းစိတ်ပျက်သွားတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရာအားလုံးနှေးသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် Captain နဲ့အတူငါကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့မြန်နှုန်းကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ ၎င်းသည် pop နှင့် smtp တွင် port နံပါတ်ကိုအထူးဂရုပြုပြီး Mail ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ Java ကို 20 သို့ update လုပ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အလိုအလျောက်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ် System Preferences panel သို့သွားရပါမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ပရိုဂရမ်သဟဇာတမရှိဘဲဆက်လက်ဆက်လက်ပါပြီ။
ငါမြင်တဲ့အတိုင်းငါ 20 ခုနှစ်ကမင်းရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ imac 2007 ရှိတယ်၊ ငါ yosemite ကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်တယ်။ ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပြီးတဲ့နောက်ငါပြန်လာခဲ့ရတာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ၊ ငါပြtheနာမရှိဘဲ IOS ကပ္ပတိန်နဲ့မရဲရဲခဲ့ဘူးလား။
ငါကပ္ပတိန်ကို Macbook တွင်တပ်ဆင်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ကူညီနိုင်မလားကြည့်ကြစို့။ Monitor သည်ပိတ်ပြီးတစ်ယောက်တည်းဖွင့်သည်၊ ၎င်းသည်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုမနှောင့်ယှက်သော်လည်း၎င်းသည်ဖွင့်သည်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းပိတ်သည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ…နောက်ကျသော်လည်းကျွန်ုပ်ခါးသီး။ မနှစ်မြို့ဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Yosemite ထည့်သွင်းပြီး ၀ ယ်ခဲ့သော ၂၀၁၂ နှစ်လယ်တွင် MacBook Pro ရှိခဲ့သည်။ သူကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ မြန်နှုန်းကိုလက်ခံတယ် (ဘယ်တော့မှမပျံဘူး) နဲ့အရမ်းတည်ငြိမ်တယ်။ El Capitan ကိုကျွန်တော် update လုပ်ပြီးအရာအားလုံးမှားယွင်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါမှန်ပေမယ့် USB, keyboard နဲ့ hardware တွေအားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ အမြန်နှုန်းကအရမ်းဆိုးတယ်၊ အရမ်းနှေးတယ်၊ နှေးနှေးသည်။ Windows 2012 သည်ဤ mac ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ လျှောက်လွှာများကိုဖွင့်ရန်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဆိုးဆုံးမှာအရောင်ဘောလုံးသည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါပိတ်သိမ်းအတင်းရန်။ ငါ့အဘို့, ဒါဟာကြောက်မက်ဘွယ်သောအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတစ်ခုတည်းဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
ဒံယေလ Pilnik ဟုသူကပြောသည်
ချစ်ခင်ရပါသော၊ MacBook Pro (၁၅ လက်မ၊ Late 15)၊ Memory 2008 GB ပေါ်တွင် El Capitan (ခြစ်ရာမဟုတ်ပါ) ကိုနှစ်ကြိမ်တပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။ နှစ်ခါစလုံးမှန်ကန်စွာ update လုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှစ်ခုလုံးသည် Total Finder သည်အလုပ်မလုပ်ပါ (သို့သော်ကျွန်ုပ်သိပြီးဖြစ်သည်) နှင့်၎င်းသည် (အချို့သောဂူးဂဲလ်ဒရိုက်များ) ကိုအသိအမှတ်မပြုသောကြောင့်အချို့သောဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်သွားလာခွင့်မပြုပါ။
နောက်တစ်နေ့တွင်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ Apple ၏ပန်းသီးဖြင့်“ စစ်ဆေး” ပြီး system load တိုးတက်မှုဘားကိုလုံး ၀ လွတ်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးလုံးဝတိုးတက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကံကောင်းတာကငါ Back Up ရှိခဲ့ပါတယ်နှင့် Time Machine နှင့်အတူ Yosemite သို့ပြန်သွားခဲ့ပြီးပစ္စည်းကိရိယာများအဆင်ပြေပါသည်။
Daniel Pilnik ကိုပြန်ပြောပါ
boot camp နှင့် EL CAPITAN ပါသော windows 10 တွင်ကီးဘုတ်ကိုအသုံးပြုရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။
ငါ Mac နှင့် Windows applications များနှင့်အတူအပြိုင်အလုပ်လုပ်ကတည်းကဒါဟာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါသူတို့တစ်တွေ update ကိုလွှတ်ပေးရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်မည်သူမဆိုအဖြေတစ်ခုသိလျှင်ငါကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်က၎င်းကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသိပါသလား။
Olibibiae ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့နံနက်ယံ၌ update လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောအမှားများသည် USB port များနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်ပရင်တာ (Epson XP-625) နဲ့ TV adapter (Eye TV Elgato) ကကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ ယခုအချိန်အထိသူတို့သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ ယခုအခါဒရိုင်ဘာများကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုတော့ပါ။
သင်ဤ USB ပြhasနာရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောသူမဟုတ်ပါ။ Mac မှာဘာရှိသလဲ
ကောင်းပြီ၊ ၂၀၁၂ နှောင်းပိုင်းမှ ၂၇ လက်မ iMac (27 GHz Intel Core i2012 နှင့်2GB RAM) ဖြစ်သည်။ တီဗီ adapter ၏ပြtheနာကိုထုတ်လုပ်သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကမာသတ္တုတွင်းသည် iMac ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်မူကားကျွန်ုပ်တွင် RAM ပို၍ ရှိသည်။ ပြproblemနာကဒီ adapter ကိုငါမစစ်ဆေးနိုင်လို့ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုဆိုးတာကမကောင်းတာကြောင့် USB ကကြွက်တွေ၊ spikes နဲ့အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအတွက်ကောင်းတယ်။
ဒီကိစ္စမှာသူတို့ကဝဘ်ပေါ်မှာပြောခဲ့ရင်ငါဒီ adapter ကိုတောင် Apple Store မှာတောင်မှငါမှတ်မိသေးတယ်ထင်လို့ရောင်းလိုက်တာနဲ့သူတို့က Apple နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ သင်၏ပြproblemနာကိုမကြာမီဖြေရှင်းတော့မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ငါ Mac Retina ပေါ်ရှိ El Capitan သို့အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီး Parallel Desktop ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေစဉ်အလွန်မြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
ငါ Office Outlook နဲ့ပြtheနာရှိနေတယ်၊ ​​ငါဖွင့်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာထပ်တူပြုဖို့စတင်တယ်၊ အဲဒါကအမြဲတမ်းကြာတယ်၊ Outlook သည်စိတ်မချရတော့ပါ။ အကောင့်မြောက်မြားစွာရှိခြင်းသည်အရေးတကြီးဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သောအဓိကပြproblemနာဖြစ်သည်။
အသစ်ပြောင်းခြင်းကတည်းက ZTE modem သည်ကျွန်ုပ်ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ငါကဖယ်ထုတ်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် install လုပ်ဖို့ဆော့ဖ်ဝဲကိုမကပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်မထားဘူး။ ဒါနဲ့အင်တာနက်ကုန်သွားတော့တယ်။ Apple Support တွင်သူတို့က Captain iOS ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်ပြောသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ? ငါသည်သင်တို့၏အကြံပြုချက်များတန်ဖိုးထား !!!
ကျွန်ုပ်အိမ်အပြင်ဘက်တွင်ရှာဖွေရန် USB modem ကို ၀ ယ်လိုသည်။ OSX El Capitan 10.11.1 နှင့်သဟဇာတမဖြစ်နိူင်ပါ
Jose Maria သို့ပြန်သွားပါ
Jorge Fuentes ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ update နှင့်လည်းအတွေ့အကြုံမကောင်းပါ။ Im ကျွန်ုပ်၏ Imac သည်၎င်းကိုပြန်လည်စတင်သည့်အခါ၎င်းသည်ပန်းသင်္ကေတဖြင့်ဆက်မနေဘဲဘားက load မလုပ်ပါကကျွန်ုပ်သည် Yosemite သို့ပြန်သွားရမည်ဖြစ်ပြီးထပ်မံကြိုးစားမည်မဟုတ်ဟုထင်ပါသည်။ ။
jorge fuentes အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ Jorge, သင်ဖြေရှင်းနိုင်မလား ငါအတူတူပင်ပြproblemနာနှင့်အတူရှိ၏ မင်္ဂလာပါ
El Capitan ကိုမတပ်ဆင်ထားသူမည်သူမဆို၊ မလုပ်ပါနှင့်၊ အထူးသဖြင့် ၁၀.၁၁.၁ မွမ်းမံခြင်း၊ သင်၌အခက်အခဲများစွာ၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးခြင်း၊ နှေးခြင်းသို့မဟုတ် ပို၍ ဆိုးရွားခြင်းများဖြစ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင် startup တွင်မြဲပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာကွန်ပျူတာတစ်ပတ်ကျော်ကျော်မပါခဲ့ပါ။ El Capitan ကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီမှာဖတ်ပြီးဒီမှာနဲ့အခြားဖိုရမ်များမှများစွာသောငါတို့မှာအရင်ပြdidn'tနာများမရှိခဲ့ရင်ကြီးမားတဲ့ပြproblemsနာများရှိသည်။ ဒီဟာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပြတင်းပေါက်တွေမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ပြproblemsနာများစွာရှိသည့်အက်ပဲလ်ကိုစနစ်မတင်သင့်ပါ။
အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဤအစီရင်ခံစာနှင့်သင်၏မှတ်ချက်များ။ ၎င်းသည်ပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့်နားလည်သော်လည်းကောင်းစွာနားလည်သည်။ Apple ကအဖြေတစ်ခုမြန်လျှင်မြန်လားဆိုတာကြည့်ကြရအောင်၊ ဈေးနှုန်းမြင့်မားသောသုံးစွဲသူများစွာရှိပြီး OSX အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ပျက်မိသည်။
ဂျော့ဘ်စ်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ Mac သည်စနစ်များကိုတစ်ချိန်လုံးဖယ်ရှားပစ်ပြီးသူတို့ဖယ်ရှားသည့်စနစ်ကိုတိုးတက်စေရန်အချိန်မယူကြပါ၊ ၎င်းတို့သည်တိုးတက်မှုတစ်ခုအဆုံးမသတ်နိုင်သေးပါ။ အထူးသဖြင့်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်များတွင်တိုးတက်မှုများသည်များသောအားဖြင့် Mac ကိုအသုံးပြုသောပညာရှင်များကိုမေ့သွားသည်။ beta ထဲရှိစနစ်ကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းသည်အချိန်ဖြုန်းခြင်း၏အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့် Apple ကမှန်ကန်အောင်လုပ်တာကိုအာရုံမစိုက်တာလဲ ??! သူတို့ထွက်ယူစနစ်တိုးတက်အောင် !! သူတို့ကအလွန်ကောင်းသောဗားရှင်းရသည်အထိပြောင်းလဲပစ်ကြဘူး !! (?!)
Rodolfo Toro Beas ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Macbook Pro 2011 2,7 - 7Ram ပါတဲ့ i4 ရှိတယ်၊
El Capitan ကိုအဆင့်မြှင့်တာကောင်းပါသလား။
Rodolfo Toro Beas အားပြန်ပြောပါ
ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါကပ္ပတိန်ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ် macbook (၂၀၀၇) ရှိပြီး၎င်းသည်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက။ သို့သော်တပ်ဆင်မှုသည်အလယ်တွင်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းနေခဲ့သည်။ ထိုတွင် ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်သော်လည်း ၇ နာရီကြာသည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ 90% မှာ Installation ကိုထပ်တူဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်၊ ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ကြိုးစားမှုများစွာပြီးနောက် Mac ၏ hard drive ကို format လုပ်ခြင်းသည်၎င်းသည်နောင်တွင်ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်အရန်ကူးခြင်းမှသော်လည်းကောင်း၊ အင်တာနက်မှသော်လည်းကောင်း Yosemite ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်ခွင့်မပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဗားရှင်း»တင်ခဲ့သည်။ drive ကို format ပြီးတာနဲ့ငါ Yosemite ကို install နိုင်ခဲ့သည်။ El Capitan ကြောင့်နာရီများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
Carlos Lorenzo ဟုသူကပြောသည်
Jordi ကိုကြည့်ရအောင်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က iPhone4ကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး update က 5G ကိုရိုက်ကူးချိန်မှာရွေ့တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ (သူတို့ကဆက်ပြီးရောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး)၊ အဆုံးကနေ MacBook pro3နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တာက ၂၀၀၈ က iTunes4ကိုတောင်းသည်။ Itunes ကို update လုပ်ရန်ကြိုးစားသည်။ Snow Leopard (၎င်းကို iTunes 15 သိလိုပါက w xp တွင်)၊ Snow Leopard ကို ၀ ယ်လိုက်သည်။ ယခုတွင်ပြfixedနာကိုဖြေရှင်းလိုက်သည်။
မနေ့ကငါ ၉.၁ ကိုမွမ်းမံခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ကိုအများကြီးတောင်းဆိုလို့သက်တမ်းကုန်သွားပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Itunes 9.1 နဲ့ငါ့ရဲ့ iPhone ကိုထိန်းချုပ်ပြီးပြီ (nanai ကိုပြန်လှည့်ပါ) ဆိုတာငါ့ကိုမသတိပေးဘူး။ အခုတော့ Itunes 11 ကဘယ် Lion နဲ့ပိုလိုက်ဖက်မလဲဆိုတာမေးတယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Lion သို့မဟုတ်ထိုထက်မြင့်သောအရာကိုတပ်ဆင်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ macbook pro သည်နှေးကွေးသွားပြီးသဟဇာတဖြစ်မှုအမျိုးမျိုးကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။
အကျဉ်းချုပ် - IOS9ဖြင့်အိုင်ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်သည် laptop ကိုလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က XP ရှိသည့်ကွန်ပျူတာမှစီမံရမည်။ ငါသည်လည်း RAM ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပြီးရှင်းလင်းသောခိုင်မာသော hard drive ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်၏ Macbook Pro သည် Apple သည် Iphone 10 ကိုကိုင်တွယ်ရန်လွန်သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်။
Pelínသည် Cupertino ၏ပိုက်ဆန်လျှော်ကိုသွားတက်သည်။
carlos lorenzo အားပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေသည့်အရာတစ်ခုမှာ iPhone ကို ၂၀၀၉ တွင်အသုံးပြုပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည် iTunes ၏လုပ်ငန်းများကိုအတူတူလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုမှာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှ MacBook Por OS X El Capitan နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် https://www.soydemac.com/estos-son-los-mac-compatibles-con-os-x-el-capitan/ ဘာလို့မွမ်းမံတာလဲ Back Machine တွင် Time Machine (သို့) OS X software ၌ USB-Sd-CD တွင်သိမ်းဆည်းထားသမျှကာလပတ်လုံးပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာ iPhone 6S မထွက်မချင်းငါဟာ iPhone 5၊ စီမံခန့်ခွဲမှုပြzeroနာလုံးဝမရှိဘူး၊ iTunes၊
Jordi ကောမင်းရဲ့အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာရှင်းပြရန်မလိုအပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Iphone5ကိုဝယ်သောအခါ iTunes 11 လိုအပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ OSX Leopard ဖြစ်သောကြောင့် iTunes 11 မရရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Snow Leopard သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးကိစ္စပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ အခု iPhone 9.0 ကိုလုပ်တော့ Snow Leopard ကမပံ့ပိုးပေးတဲ့ iTunes 12 ကိုတောင်းတယ်။ Lion နဲ့အထက်သွားရမယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် RAM ကိုမတိုးပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ macbook pro သည်သေချာပေါက်ပေါ်လာမည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသဟဇာတများ မှလွဲ၍ Lion နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသောနှေးကွေးလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်နားမလည်တာကဘာလို့ Apple ကကျွန်တော့် Snow Leopard မှာ iTunes 12 ကိုသုံးခွင့်မပြုတာလဲ။ အဲဒါကငါ့အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ iTunes 12 (IOS9 နဲ့ iPhone ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတယ်) ရှိရင် OSX ကိုမွမ်းမံခိုင်းတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်၏ကျိုးနွံသည့်အမြင်အရ Apple ၏မူဝါဒမှာ - OSX ကို update လုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အားဖိအားပေးသည် (သို့မဟုတ်သင် IOS 12 ဖြင့်သင့် iPhone အတွက် iTunes9ကုန်သွားပြီ)၊ သင့်မှာ macbook မှာနှေးကွေးလိမ့်မည်၊ OSX အသစ်နှင့်အလယ်လတ်တွင်သင်နောက်ထပ် Macbook အသစ်တစ်လုံးဝယ်ရလိမ့်မည်။
ဥပမာ - ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော iPhone 3G ကိုမူရင်းမဟုတ်သောအက်ပလီကေးရှင်းမရှိဘဲနောက်ဆုံးပေါ် firmware နှင့်အတူဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းမှာမထိုက်တန်ပါ။ အကယ်၍ Apple ကသင့်အားအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ခွင့်မပြုပါကသင့်အတွက်အလုပ်ဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်။
ရီကာဒို Flores ဟုသူကပြောသည်
El Capitan အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုသည်ထုတ်လုပ်မှုစားသုံးမှုကိုအနည်းငယ်သာလျော့နည်းစေသည်။ ပြstartsနာမစခင်အထိကောင်းပါတယ် My Mac Mini သည် Yosemite နှင့်အလွန်နှေးကွေးခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Snow Leopard 10.6.8 သို့ထပ်မံဒေါင်းလုပ်လုပ်ရသည် (သို့သော်၎င်းသည် iCloud နှင့်လိုက်ဖက်မှုမရှိသောပြproblemနာ)၊ El Capitan ရှိစွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပါ၊ အားလုံးကပုလဲတွေအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၀.၁၁.၁ update ရောက်လာတဲ့အခါ NTFS drives တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အထောက်အပံ့ကိုနှုတ်ဆက်သွားတယ်။ ယခုငါပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးပါက Mountain Lion သည် iCloud ကိုထောက်ပံ့ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ထပ်မံရှိသေးသည်။ အချုပ်အားဖြင့် Operating Systems သည်တပ်ဆင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းနှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထောက်ပံ့နိုင်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲမရှိသောကြောင့်ပြatureနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ El Capitan သည်ကောင်းမွန်သော OS တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း Hardware ကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောနောက်ဆုံး OS တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ထောက်ခံချက်တစ်ခုအနေဖြင့် El Capitan သည်သင်၏ hardware သည် Core i10.11.1 ဖြစ်သည့်အခါအနည်းဆုံး RAM တွင် 3Gb ရှိလျှင်သင်၏ hardware နိမ့်ပါကသင်၏ Operating System ကိုထိန်းသိမ်းပါ။
Ricardo Flores သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် app store ၏ update ကို install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ imac သည်ပြန်လည်စတင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် install လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးခြင်းမရှိသေးပါ။ ၎င်းသည်ပိတ်ထားခြင်း၊ ပိတ်ထားခြင်းနှင့်ပန်းသီးနှင့်အတူဘားကိုဆက်လက်သုံးစွဲခြင်း။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
ဟင် Vinka၊ ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်သည် Time Machine (သို့) သင်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်၊ မည်သည့်နေရာမှပင်တပ်ဆင်ပြီးသိမ်းဆည်းခြင်းကိုသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ သင်မလုပ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်ထပ်မံတပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ Mac မှာဘာရှိသလဲ
ငါ့မှာ ၃.၂ Ghz Imac ရှိတယ်။ ငါ capitan ကို ၃ ကြိမ်ပြန်သွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဘားကအဆုံးကိုရောက်သွားတယ်။ ညအိပ်လိုက်တယ်၊ ငါ disk ကိုပြင်လိုက်ပြီး restart လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဘားက ၁၀၀% တင်ထားတယ်။ ဒုတိယနေ့ pc မပါဘဲ ... နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်တွေမသုံးဖို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြုပြင်ချင်တယ်။
သူတို့ operating system ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါတိုင်းပြaနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့မှာ Leopard ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အရမ်းကောင်းတယ်။ သူ့ကိုငါဖမ်းလိုက်တော့သူတို့ဟာငါ့ကို YOSEMITE အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်။ ငါမကြိုက်ဘူး။ LEOPARD ကိုပြန်တင်လိုက်တယ်။ အခုငါ EL CAPTAIN ကိုအတင်းဖိအားပေးလိုက်ပြီးငါမပျော်ဘူး။
ဒါကမဖြစ်ဘူး၊ ငါ IMAC ယူဖို့စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်အတွက်တစ်ခုခုပြောင်းလဲတဲ့အခါတိုင်းပိုဆိုးလာတယ်၊ ငါအရောင်တွေ၊ အိုင်ကွန်တွေစသဖြင့်ရောက်တာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။
ဒီအက်ပဲလ်ဟာငါထင်တာကတော့သူတို့ခေါင်းထဲကို ၀ င်သွားပြီးသူတို့အရင်ကအောင်မြင်ခဲ့တာကိုဆုံးရှုံးဖို့စတင်နေပြီ။ ငါဟာလက်ရှိငါအဆင်မပြေသေးတဲ့ Apple ရဲ့ကမ္ဘာကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ Captain ကို update လုပ်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်၏ macbook pro သည်ကျွန်ုပ်၏ဂီတစတူဒီယိုမှမည်သည့်အသံကဒ်ကိုမှအသိအမှတ်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပန်းသီးသို့အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပြီးသူတို့ဖြေကြားခြင်းမခံရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ပတ်သာကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
နေရာတော်တော်များများမှာ yosemite ကိုဘယ်လိုပြန်သွားရမလဲဆိုတာဖတ်ခဲ့တယ်၊ ငါအချိန်စက်ကိုလုပ်တယ်၊ disk ကိုဖျက်ပစ်ပြီးဆော့ဗ်ဝဲအဟောင်းကိုပြန်တပ်ချင်တယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုမကူညီဘူး၊ တချို့ကအဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိရင်ဒါမှမဟုတ်ငါ့အတွက်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါချက်ချင်းအကူအညီလိုတယ်။ နှုတ်ဆက်ခြင်း
အန်တိုနီယိုကောင်းတယ်၊ https://www.soydemac.com/como-volver-a-os-x-yosemite-desde-os-x-el-capitan/ တကယ်ကောင်းပါတယ်
ငါအယ်လ် capitan နှင့်ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်သောအစီအစဉ်များရှိပါတယ်
Mario ramirez ဟုသူကပြောသည်
Yosemite ၏စွမ်းဆောင်ရည်ပြီးနောက် El Capitan; ငါ၏အ MacBook Pro ရှိ USB port များသည်ရပ်တန့်သွားသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုသာအားသွင်းသည်။ ဒီဟာဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကျေးဇူးပြုပြီးငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။
Mario Ramirez အားပြန်ပြောပါ
Apple က OS X 10.11.2 ၏ beta ကို USB ပေါ်တွင်များစွာလွှမ်းမိုးမှုပြုသည်။ ၎င်းသည်ယေဘုယျပြproblemနာမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ yosemite မှ OS X El capitan သို့ကျွန်ုပ်၏ macbook air 2015 ကို update လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုမြင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်လုပ်သင့်သည်၊ မလုပ်သင့်သည်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကအကြံပေးလိုပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ မေးလ်ဖိုင်တွဲရှိအရာအားလုံးကိုကူးယူပြီးမေးလ်မိတ္တူပွားပြီး Mac အသစ်တစ်ခုတွင်ကူးထည့်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုပြုပြင်ပြီးပါပြီ။ အီးမေးလ်များမပေါ်ပါ။ ဖိုလ်ဒါ, V2 အစား (ဒါငါခဲ့တယျ) V3 ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဒီ mac အသစ်မှာကူးယူခဲ့တဲ့အီးမေးလ်တွေအားလုံးကိုဘယ်လိုရှာတွေ့နိုင်မလဲ။
ငါ osx သည်အယ်လ် Capitan ဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြရန်မေ့လျော့ခဲ့သည်
ငါ့မှာ Mac mini ရှိတယ်။ ၂၀၁၂ အစကတည်းကငါ့အတွက်ငါ့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါကပ္ပတိန်ကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်ပြီဆိုတော့သူကဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတုန်ခါနေပြီးတချို့နေရာတွေမှာစတုရန်းပုံပြင်တွေမညှပ်တော့ဘူး။ ငါဥပမာ YouTube သို့မဟုတ်သတင်းစာမှသတင်းတစ်ခုကိုဖွင့်သောအခါဖြစ်ပျက်ပုံရသည်။
တကယ်တော့ငါကပ္ပတိန်ကို update လုပ်ကတည်းကငါဖြစ်ပျက်သည်နှင့်သူကတိုက်ဆိုင်မှုရှိမရှိသို့မဟုတ် update ကိုအတူတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လျှင်ငါမရှိတော့ငါသိ၏။ မွမ်းမံခြင်းမပြုမီငါ့အတွက်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်သည်။
ငါ Captain ကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့ပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအီးမေးလ်အားလုံးကို trays (၄) ခု၊ input၊ output၊
ငါသူတို့ကိုငါပြန်ရနိုင်မလားမည်သူမဆိုသိသလား အနည်းဆုံး inbox ကိုသူများ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် iMac ကိုဝယ်ပြီးကတည်းကနှင်းကျားသစ်ကိုတပ်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ငါ update လုပ်ရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံရ ဒီအတွက်တော့လက်ရှိ iOS X ကိုဝယ်ဖို့လိုပုံရတယ်။ ပန်းသီးမှာသူတို့ကငါ့ကို El Capitan ဆီ update လုပ်ဖို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပျက်သဘောဆောင်တဲ့အရာအားလုံးကိုဖတ်ပြီးပြီ။ အရာရာတိုင်းဟာလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါကြောက်တယ်။ စိတ်မကောင်းစရာက iTunes အတွက်သာငါ iOS ကိုပြောင်းရတော့မယ်။ ကျန်တာတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီ။ ဒါဆို Yosemite နဲ့ Mavericks တွေလည်းရှိမယ်လို့ငါမျှော်လင့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေဟာ Apple store မှာမရှိတော့ဘူး။ ဤအရာများကိုအဆင့်မြှင့် တင်၍ မရပါလား
ကျွန်ုပ်၏ Mac ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်အစောပိုင်းကတည်းကအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးပါပြီ။ El Capitan ဟာ Apple အတွက်အစဉ်အဆက်အဆိုးရွားဆုံး update ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါပြန်ယူပြီး yosemite မိတ္တူကိုပြန်ယူပြီးအားလုံးပြန်ထားပြီ။ ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းအားလုံးနဲ့အကြိမ် ၅ ဆလောက်မွမ်းမံဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါအရှုံးပေးလိုက်တယ်၊ Mac စဖွင့်တဲ့အခါမှာဆက်ရှိနေသေးတယ်၊ ဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူး
Apple က Captain ရဲ့ update ကိုအများကြီးပြုပြင်ရလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုထပ်မံမွမ်းမံရန်နှင့်အနာဂတ် update များကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ရန်ငါသေချာစွာပြောရမယ်။
Hlola JM, ခင်ဗျားနဲ့တူတူပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ Time Machine ကိုအရန်သင့်သိမ်းဆည်းပြီးတဲ့နောက်အဲလ် Capitan ကိုအခမဲ့ update လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာကနောက်ထပ် 4Gb RAM ကို ၀ ယ်ပြီး install လုပ်ပါ။ 8Gb RAM ကို install လုပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ Snow Leopard တွင် update ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပုံရသည်။ ငါ VWMfussion ကို version 8 သို့ update လုပ်ရန်လိုသည်။ ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အရာတွေကိုသင်မကြိုက်ဘူး (iTunes 12 ကိုမကြိုက်ဘူး) ဒါပေမယ့် Ipad စတိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်ပုံရတယ် (Icons, etc ,,)
၂၀၀၈ ကနေ 2008Gb ပါတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ macbook pro ဟာ Captain နဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ရှိပုံရပါတယ်။
PS: Apple ၏အားနည်းချက်များမှာ iTunes 12 သည် Windows XP တွင်သာမကငါးနှစ်မျှသာရှိသေးသည့် Snow Leopard တွင်ပင်တပ်ဆင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
El Capitan တွင် Quick Time သည် .avi ဖိုင်များကိုမဖွင့်ပါ၊ ၎င်းကိုအခြား format သို့ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖို့ App Store ကနေဗွီဒီယိုဖွင့်စက်ကိုကျွန်တော် download လုပ်ရတယ်။ Apple ကပစ္စည်းပစ္စယတွေ။
မင်္ဂလာပါ၊ ၎င်းသည်ထိနေသောခေါင်းစဉ်ကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်သော်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာတော်တော်များများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ mac သိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းတွင်အဖြေမရှိပါ။
ငါ၏အ macbok လေထု၏သိုလှောင်မှုကိုတိုင်ပင်သောအခါကျွန်ုပ်၌ ၈၂ gb အခမဲ့ရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များတွင်ကျွန်ုပ်တွင် ၁၂၅ gb ရှိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ 82gb mac ဖြစ်သောကြောင့်ဘာဖြစ်မည်ကိုမသိပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် El Capitan သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏအသုံးပြုသောပရိုဂရမ်များဖြစ်သော AutoCad, SketchUp၊ ... ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်၏ 3.0 hard drive သို့မရေးနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်များအားလုံးကိုအရံသိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ရင်ခွင်မိတ္တူပွားထားသည့်အရာအားလုံးဆုံးရှုံးသွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ် format မလုပ်နိုင်ပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့်“ El Capitan” သည်ကျွန်ုပ်၏ Mac ကိုယခင်ကထက်ပိုမိုနှေးကွေးစေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် SketchUp တွင်“ bug splait” တစ်ခါမျှမဖူးဘူး၊
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာအချက်အလက်: iMac (၂၁.၅ လက်မ၊ Late 21.5)၊ 2013 GHz Intel Core i2.9,5GB 8 MHz DDR1600, NVIDIA GeForce GT 3M 750 MB
ငါ update လုပ်ဘယ်တော့မှအလိုရှိ၏
Disappointed User ကိုပြန်ကြားပါ
ကျွန်ုပ်မှာပြBနာတစ်ခုရှိတယ်။ EL CAPITAN ကိုတိုးမြှင့်လိုက်တယ်။ အခုကျွန်တော့်ရဲ့ hard drive ကစာဖတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အရင်ကပြproblemsနာမရှိဘဲစာဖတ်ခဲ့တယ်။ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
အချစ် Garcia က ဟုသူကပြောသည်
El Capitan ကခြေဆွံ့သူဖြစ်ရမည်၊ အစာရှောင်ခြင်းသည်အလွန်နည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး က pilonga သစ်အယ်သီး။ ငါ့မှာ imac တစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ငါ့ရဲ့ imac ကိုမပြောင်းလဲခင်ပျံသန်းနေတဲ့အရာအားလုံးချောချောမွေ့မွေ့ (i5, 3,4gh and 8gb) ။ ပရိုဂရမ်များကိုအံ့သြလောက်သောမြန်နှုန်းဖြင့်ဖွင့်ပေးခဲ့သည်၊ ကွန်ပျူတာကမျက်စိတစ်မှိတ်ထဲကျွန်တော့်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ ဘယ်ပရိုဂရမ်မှာမဆိုငါနှိပ်လိုက်တဲ့ရွေးစရာကစာရွက်စာတမ်းကိုမသိဘဲမသိပဲအသုံးချခဲ့တယ်။ ယခု……။ Grumete (Capitan နှင့် na de na မှမဟုတ်) သည်ဤသစ်အယ်သီးဖြင့်ကွန်ပျူတာစတင်သောအခါ ၄၅ စက္ကန့်ကြာသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာဟောင်းများ၏အဆင့်အထိအားလုံးနှေးကွေးသွားသည်။ စိတ်ရင်းမှန်နဲ့စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသောအကြံပေးချက် - မွမ်းမံပါနှင့် (ကျွန်ုပ်၏ Mavericks ကိုလက်လွှတ်လိုက်သည်နှင့်) ကျွန်ုပ်သည် CAPITAN = SLOW (၎င်းသည် iphone နှင့်သာချိတ်ဆက်ရန်အတွက်) ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်။
ဒီစာသားပြီးနောက်အမြီးအမောက်နှင့် sarcasm နှင့်အတူတင်ဆောင်နှင့်ပြီးသားလေးနက်ရှုထောငျ့မှ; CAPITAN ကကျွန်တော့်ကိုစိတ်ပျက်စေခဲ့တယ်။ Mavericks ငါ့အတွက်လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်နှောင့်နှေးခဲ့တယ်။ Mac ၏ Windows Vista ရောက်ရှိလာပြီ၊ ၎င်းသည်ဆက်လက်မနေသင့်ဟုငါမျှော်လင့်သည်။
တကယ်စိတ်ပျက်စရာ။ မွမ်းမံပါနှင့်။ ၎င်းသည် "TRILERO" လည်ပတ်သောစနစ်ဖြစ်သည်
အချစ် Garcia Garcia က
Amando Garcia သို့စာပြန်ပါ
ငါမှတ်ချက်တွေကိုဖတ်ပြီးသူတို့ဟာသေးငယ်တဲ့ပြareနာတွေဖြစ်ပေမဲ့အမှန်တရားကတော့၊ ငါ့ရဲ့အာရုံကြောတွေအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ Photoshop ထဲမှာပလပ်အင်တွေကငါ့ကိုမဖမ်းတော့ဘူး။ ငါသူတို့ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းဖို့အဖြေတစ်ခုမတွေ့မချင်း .. ငါရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏အယ်ဒီတာ Final Cut X ဗွီဒီယိုများကို uninstall လုပ်ရန်နှင့်ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေရန် Tascam driver us144 နှင့် ထပ်မံ၍ ဒရိုင်ဘာများစွာကိုတွေ့ရသည့်အတွက်ယနေ့အထိအသစ်ပြုပြင်ခြင်းမရှိပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အသံကဒ်ကို သုံး၍ မရပါ။ ဒါကြောင့်ငါတစ်ခုခုလုပ်ချင်တိုင်းအခါတိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုငါလာပါတယ်။ ဒါက update တစ်ခုလို့ယူဆပြီးမင်းဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ သင်စတင်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာနိူင်သော်လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့သင်ပေးတဲ့ဗားရှင်းတွေကိုသင်အဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ ဒီ fucking ကပ္ပတိန် .. စိတ်မကောင်းပေမယ့်ငါ့ကိုရူးသွပ်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်အမှန်တရားမှာ, ငါ့ mac အသစ်ဗားရှင်းမှ update လုပ်ဖို့တစ်နေ့ငါ့အားပြောလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိခဲ့ပါ .. လာပေါ်လာပြီငါကပိုကောင်းနှင့် NO ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည် ဆဲလ်ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာမင်းခေါင်းကိုက်နေတာကိုငါပြောခဲ့သလို .. မင်းကမွမ်းမံလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့အသစ်ကျားသစ်နဲ့အံ့သြစရာကောင်းတယ် ositions ဒါပေမယ့် my mac .. search .. install uninstall .. ထပ်မံရှာဖွေပါ .. tiring !! အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါခံစားမိတာက .. စိတ်ပျက်စရာ / /
Edgardo GH ဟုသူကပြောသည်
အလွန်အမင်းနှေးကွေးပြီးအဆင့်တစ်ခုစီမှာကော်ဖီသောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်လုံးဝအကျိုးမရှိသည်၊ ကျွန်ုပ် Yosemite သို့ပြန်ချင်သည်။
Edgardo GH ကိုစာပြန်ပါ
နယ်လ်ဆင် Cea ဟုသူကပြောသည်
ချစ်ခင်ရပါသော၊ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ် OSX ကို update လုပ်လိုက်ပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ် Outlook ထဲသို့ ၀ င်လိုက်သည်။ ၎င်းသည် stuck ဖြစ်နေပြီ။
Nelson Cea သို့ပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် Mountain Lion နှင့်အတူ iMac ရှိနေပြီးကျွန်ုပ် HDD ကို format မလုပ်ပဲ Capitan ကိုတပ်ဆင်လိုပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ရင် Captain ကကျွန်တော့် DVD burner အဟောင်းကိုထောက်ပံ့ပေးမလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါဒီလိုခုန်မသွားခဲ့ဘူးဆိုပေမယ့်တကယ်တော့မင်းမှာ OS X ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ဖို့ပြhaveနာမရှိသင့်ဘူးလို့ငါမပြောနိုင်ဘူး။ မင်းကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒါကိုမွမ်းမံခြင်းမပြုလုပ်ဘဲသင်ဟာ installation ကို scratch ကနေသွေဖည်သွားမှာပါ။ iMac အမျိုးအစားနဲ့အတူအမြဲတမ်းပိုကောင်းလိမ့်မယ်၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့အမှားအယွင်းများကိုသင်ဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်။
ဂျော်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်မှာအယ်လ် Capitan အလုပ်လုပ်နေပြီးပြproblemနာတစ်ခုတည်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်သူကအချက်အလက်ဒီဗီဒီတွေကိုမဖတ်ပါဘူး။ ငါပြtheနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာသိလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သူတို့ကို Quicktime နှင့် VLC ဖြင့်မကစားရန်ကြိုးစားပါ
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာမဖော်ပြခဲ့ပါ၊ ပြproblemနာက ၄ င်းတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုသော်လည်းဂီတစီဒီများက ...
တနည်းအားဖြင့် "devices" အပိုင်းမှာဘာမှမပေါ်ပါ။
ဟိုင်းဂျိုဒီ၊ ကျွန်ုပ်၏ MacBook Pro သည်ကပ္ပတိန်ကိုထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုဖွင့်ပိတ်ပိတ်။ မရပါ။ ငါအများဆုံးစီမံနိုင်ခဲ့တာကတော့ alt key ကိုနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားကွန်ယက်တစ်ခုရွေးပြီးကျွန်ုပ်၏စကားဝှက်ကိုရိုက်စေသည်သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားအသိအမှတ်မပြုပါ။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Hello Jordi ဆိုတဲ့မေးခွန်းကခင်ဗျားအဖြေသိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မနေ့ကပဲ El Capitan 10.11 ကို yosemite ပါ ၀ င်တဲ့ MBP i7 စက်ရုံကို ၁၅ လက်မထည့်သွင်းခဲ့ပြီး 15 GB GB Memory တပ်ဆင်ထားပြီး Intel Iris Pro 16 ကတ်ကိုသာ install လုပ်လိုက်သည်။ Adobe cs1536 သို့မဟုတ် cc package သည်ကောင်းစွာစတင်နိုင်မည်လားသိလိုသည်။ Cinema 6d, Maya နှင့် 4ds Max ?????? … .adobe နှင့် cinema တို့သည် yosemite နှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါကသီးခြားစီ El Capital ကို 10.11.1 မှမွမ်းမံလျှင်, ပြproblemနာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်နည်း
သီအိုရီအရ၊ အကယ်၍ ဤပရိုဂရမ်များသည်သင်၏စက် X OS Yosemite တွင်အလုပ်လုပ်ပါက၎င်းတို့သည်အယ်လ် Capitan တွင်လည်းအလုပ်လုပ်သင့်သည်။ ငါအကြံပေးချင်တာကဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုတီထွင်သူများကိုသူတို့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုဖို့တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းအကူအညီလိုအပ်နေသည်။ ငါ့မှာ 15 ခုနှစ်အကုန်ကနေ 2011 လက်မ MacBook pro ရှိတယ်။ El Capitan ဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိလိုက်တဲ့အခါငါထည့်သွင်းဖို့နှစ်ရက်စောင့်ဆိုင်းလိုက်တယ်။ ပြproblemsနာများစွာရှိတယ်။ ပရိုဂရမ်တော်တော်များများကကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ မိနစ် ၂၀၊ ၃၀ အတွင်းမှာကျွန်တော့်ဘက်ထရီက ၅၀% အထိရောက်သွားတယ်။ ဘယ်ပရိုဂရမ်ကိုမှမသုံး၊ အင်တာနက်ကိုသုံးနေရင်တောင်မှငါ့ဘက်ထရီကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွန်အကျွံအပူလွန်ကဲနေတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ငါ Yosemite ဗားရှင်းကိုအချိန်စက်နှင့်အတူပြန်သွားရန်ကြိုးစားသော်လည်း၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးနောက်၎င်းသည်အေးခဲသွားပြီးစတင်ခြင်းမရှိပါ။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး အကြံဥာဏ်တစ်ခုခုလား။
Hi Sari၊ OS X ကအဲဒီဘက်ထရီပြproblemsနာတွေအတွက်အပြစ်တင်ရမယ်လို့မထင်ဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကအနီးဆုံး SAT ကိုယူပြီး၎င်းကိုစစ်ဆေးပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
OS X Yosemite ကိုပြန်သွားရင်ဒီသင်ခန်းစာအတိုင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါကပ္ပတိန်ကိုမွမ်းမံပြီး utorrent သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်အားမည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုဖျက်ပစ်ခွင့်မပြုပါသို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးချပရိုဂရမ်ကိုပိတ်ခွင့်မပြုပါကကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာကိုမပိတ်နိုင်ပါ ပုံမှန်လမ်းအတွက်
ကျွန်ုပ်သည် ၁ လခန့်အိုင်တီကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး TRACKPAD သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် MIGHTYMOUSE ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် TRACKPAD သည်ကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ခုတည်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီကနေ့ကပ္ပတိန်ကကျွန်တော့် Mac ကို update လုပ်တယ်။ သူတို့ကငါ့ကို restart ပြန်လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါငါလုပ်လိုက်တယ်။ iOS update မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ အခုဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ဖို့ပြောတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တူညီတဲ့စာပေါ်လာတယ်၊ ပိတ်လိုက်တာကိုတွေ့ရတဲ့ခလုတ်တခုလည်းပေါ်လာတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကိုလည်းနှိပ်လိုက်ပြီးကွန်ပျူတာကိုပိတ်လိုက်ပြီးတူညီတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာပေါ်လာတယ်၊ နောက်ခလုတ်တခုပေါ်လာတယ်၊ log ကိုသိမ်းဆည်းထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်၊ , ငါကြည့်ရန် log ကိုနှိပ်ရုံလိုအပ်ပေမယ့်ယခုငါကဖျက်ပစ်လိမ့်မည်ဟုစိုးရိမ်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသောဓာတ်ပုံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကဲ့သို့သောအချက်အလက်
ကပ္ပတိန်ကို update လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော့်ဖိုင်တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုပရောဂျက်တွေအတွက်အခက်အခဲမရှိပါဘူး။ ဘာလုပ်နေတာလဲ။
သင့်တွင်ပြproblemsနာများမရှိသင့်သော်လည်း Time Machine တွင်သိုလှောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြaနာတစ်ခုသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းပျက်ကွက်ပါကအလားတူပြုလုပ်ပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Mac Cap တွင် El Capitan ကိုထည့်သွင်းနေပြီးချိတ်ဆွဲထားပါတယ်။ တိုးတက်မှုမရှိပါဘူး၊ တစ်ဝက်ကျော်လောက်သာနေရပါမယ်။ ဒါဟာအခုနာရီပေါင်းများစွာကြာပြီ။
ကျွန်ုပ်သည် Yosemite ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်ကကျွန်ုပ်၏ 20 2008 iMac တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးပစ္စည်းဟာခေတ်နောက်ကျသွားပြီလို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ El Capitan မှမှတ်ချက်များကိုအင်္ဂလိပ်လိုတွေ့ရပြီး iMac အမျိုးအစားနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့မွမ်းမံဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်၊ ငါကနောင်တမရဘူး၊ ဒါ့အပြင်ဘာ့ကြောင့်လဲ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုပင်ပြတ်သားပြတ်ပြတ်သားသားပင်မြင်နိုင်သည် (အကြံပြုချက်ဖြစ်နိုင်သည်) ။ Yosemite ရှိသူများနှင့် application အသစ်များတပ်ဆင်လိုသူများအတွက်အပြည့်အဝထောက်ခံသင့်ပြီး၎င်းတို့၏ဟောင်းနွမ်းသော Mac ဟောင်းများကိုခေတ်မီ OS နှင့်အသစ်ပြောင်းသည့်ဘရောင်ဇာများနှင့်အခြားအက်ပ်များဖြင့်မွမ်းမံပါ။
Juan Carlos Peña V. (@ Juan_K_72) ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Yosemite ကို El Capitan သို့မွမ်းမံခဲ့သည်။ အမြန်နှုန်း (သို့) စာဖြင့်ပြproblemsနာမရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်အလွန်လျင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောပြproblemနာတစ်ခုမှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးယခုအခါအမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်လာသည် », Mac သည်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း (သို့) mac ပိတ်ခြင်းကြောင့်မျက်နှာပြင်ပိတ်သောအခါ၊ login မျက်နှာပြင်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်စကားဝှက်ကိုစာသားနေရာတွင်အမှတ်အသားပြုသည်။ သို့သော်ကီးဘုတ်နှင့်ကိရိယာ၏ trackpad များမတုံ့ပြန်ပါ။ တစ်ခုတည်းသော option မှာ shutdown ချရန်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းတဲ့တပ်ဆင်မှုတစ်ခုကဒီဟာကိုပြင်နေသလားဆိုတာကိုငါကြိုးစားကြည့်ရှုမယ်။ ကျွန်တော့် mac ဟာ ၂၀၁၂ အလယ်လောက်မှာ Macbook လိုမျိုးပါ
Juan Carlos Peña V. သို့ပြန်သွားသည် (@ Juan_K_72)
Jonatan sandoval ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်း၊ မင်း Mac ကိုရှာဖို့ဘယ်လောက်ကြာသလဲ (El Capitan နဲ့) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jonatan Sandoval အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို; ယေဘုယျအားဖြင့် El Capitan သည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တွင်ပြseriousနာတစ်ခုရှိနေသည်။ ငါဇာတ်လမ်းတိုများနှင့်ဝတ္ထုများကိုရေးပြီးစာသားအစားထိုးကိရိယာကိုနာမည်များအတိုကောက်ရေးရန်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ ss ကိုငါရေးလျှင် Mr. Chiva ဖြင့်အလိုအလျောက်အစားထိုးခံရသည်။
ယခုငါ ၀ တ္ထုကိုပြောင်းလဲပြီးဇာတ်ကောင်အသစ်များအတွက်အစားထိုးမှုအားလုံးကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။ သီအိုရီအရ၎င်းတို့သည်စာသားအစားထိုးနေရာတွင်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ စာမျက်နှာများမှသော်လည်းကောင်း၊ ဒါပေမယ့်အစားထိုးအဟောင်းများကိုပေါ်ထွန်းစောင့်ရှောက်လော့။ စန်ဒရာအား ss ရေးသားခြင်းဖြင့်ပေါ်လာရန်ကျွန်ုပ်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်မစ္စတာချီဗာသည်ဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေပြီးလူတိုင်းနှင့်လည်းတူသည်။
အဲဒါကိုပြန်လည်စတင်ဖို့နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ပေါ်လာတဲ့အစားထိုးတွေက Yosemite နဲ့ငါအစားထိုးလိုက်တာပါ။ Captain ကသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲမသိဘူး။
အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား။ ငါတန်ဖိုးထားမယ် ...
Josep Manel ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကပ္ပတိန်ကိုတပ်ဆင်လိုက်ပြီး၊ PowerPC ဒီဇိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်သုံးလေ့ရှိသောပရိုဂရမ်များ မှလွဲ၍ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ သူကကျွန်ုပ်အားစာမဖတ်ပါ၊ သူ့ကိုကျွန်ုပ်အားဖတ်ပြစေရန်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသင်သိသည်။ ငါပြproblemsနာများဤအမျိုးအစားရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကပ္ပတိန်။
Josep Manel အားပြန်ပြောပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ Mac pro ကို 2007 ခုနှစ်ကပါ။ သူကလိုက်ဖက်တဲ့စာရင်းထဲမှာမပါဘူး။ ကျွန်ုပ်မှာ Snow Leopard ရှိတယ်၊ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ ... ပစ်ပစ်လိုက်ပြီ ???? ဒါကို update လုပ်ဖို့နည်းလမ်းရှိလား။ တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မွမ်းမံရန်ကြိုးစားနေသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ mac book air ရှိသည်။ ဖိုရမ်များမှတဆင့်၎င်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသော်လည်း၎င်းသည် download လုပ်ရန်အချိန်များစွာကြာနေသည်။ အခုတစ်နာရီရှိပြီ၊ ဒါပုံမှန်လား?
Daniela payares ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်း!! ကျွန်တော့်မှာ Memory 2012GB4MHz နဲ့ 1600 GHz Intel Core i2.5 ပရိုဆက်ဆာပါဝင်ပြီး ၂၀၁၂ နှစ်လယ်လောက်မှာ MacBook Pro ရှိတယ်။
အချိန်တော်တော်ကြာကြာမှသူဟာကျွန်တော့်ဆော့ဝဲလ်ကိုမွမ်းမံထားတယ် (OS X ဗားရှင်း ၁၀.၈.၅) ရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်အယ်လ် Capitan သို့ပြောင်းရန် "ရွေးချယ်စရာ" ပေးသည်။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာကဆော့ (ဖ်) ဝဲအသစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလား။ ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကြံပြုလား။
ဆော့ဖ်ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမလုပ်ပါကကျွန်ုပ်သည် Safari တွင်မတင်သော ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများ (ဥပမာ YouTube) ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်မေးမြန်းသည်။
Daniela Payares အားပြန်ပြောပါ
Hello Daniela ငါနဲ့ Mac တူတူပဲ၊ အဲလ် Capitan မွမ်းမံမှုအကြောင်းသင်၏မေးခွန်းဖြေကြားခံရမလားမသိချင်ဘူး။ ငါသည်လည်းထပ်တူသံသယရှိသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် Mac တွင် OS X Captain သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေပါကကြာမြင့်ပါသည်။ ဒါဟာဖြစ်စဉ်အတွက် 8 နာရီနီးပါးခဲ့တဝက်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် !! .. ပုံမှန်လား? pliss ကူညီပါ
ကျွန်တော့်ရဲ့ mac book pro 2009 ကို update လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ကျွန်တော့် superdrive ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုအလုပ်မလုပ်အောင်လုပ်ရတာလားဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုရှိလား။
ဆော့ဖ်ဝဲအသစ်တစ်ခုစီသည်ယခင်ဟာ့ဒ်ဝဲကိုမတော်တဆထိမှန်မိခြင်းကြောင့်စားသုံးသူများ၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဆင့်မြှင့်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပုံရသည်။ အင်ဂျင်နီယာကောင်းတစ် ဦး နှင့်ရှေ့နေကောင်းတစ် ဦး သည်ကုမ္ပဏီအားတရားစွဲဆိုရန်ဆုံးဖြတ်သည်အထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ သို့တိုင်သူတို့သည်မွေးဖွားလာကြသော်လည်းသန်းချီ။ များပြားစွာယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ကာကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာများကိုဆက်လက်မမြင်တွေ့နိုင်စေရန်ထိုပြtheseနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်
ကပ္ပတိန် install လုပ်ပြီးကတည်းက mail account ၏အမှား! ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
အကယ်၍ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းသည်ထိုက်တန်လျှင် OS X El Capitan OS X Yosemite နှင့် OS X Mavericks တို့ထက်ပင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့သော်လည်း၎င်းသည် OS X Snow Leopard ဖြစ်သည်။
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, update လုပ်နှင့်ယခု outllok အတွက်အီးမေးလ်များကိုရှာဖွေအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်ငါ့ကိုသာယနေ့သူတို့ကိုလှဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ခင်ဗျား၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာစာကိုတည်းဖြတ်ရပါမယ်။
Carmem Castello Branco ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် OS X El Capitan ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီး၎င်းသည်ပြီးဆုံးခြင်းမတိုင်မီအနည်းငယ်အမှားတစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကူညီနိုင်ပါသလား။
Carmem Castello Branco အားပြန်ပြောပါ
နေကောင်းလား? ငါ El Capitan ကိုဆင်းသွားပြီးအခု mac ကအရမ်းနှေးနေပြီ။ Mac က ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းကပေါ့။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ Safari တွင်ရှိသောအရာများထက်ပိုပြီးအင်တာနက်ကို ၀ င်ရောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲသိလား
၎င်းသည် crap ဖြစ်ပြီးဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်ပရိုဂရမ်များနှင့်အမှားအယွင်းများစွာထုတ်ပေးသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုပြန်လည်ရေးသည့်အခါချွေတာသည်။ အကယ်၍ သူတို့က၎င်းကို update လုပ်သောဒီဇိုင်နာများဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ဘာကိုမှမအကြံပြုပါ။ ပိုကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုများအတွက်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်း။
ငါသည်ငါ့ Mac ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နှင့်ငါအမှတ်တံဆိပ်ပို။ ပို။ မုန်း၏။ အခုကီးဘုတ်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဆိုလိုတာကငါအသံအတိုးအကျယ်ကိုဖွင့်လို့မရဘူး၊ တောက်ပနေတယ်၊ ​​မွမ်းမံချက်ပြီးတဲ့နောက် launcher ကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ မောက်စ်ကညာဖက်၊ ဘယ်ဖက်ညာဘက် / ဘယ်ဖက်မဖွင့်ဘူး။ ငါမောက်စ်ချိန်ညှိချက်များသို့သွားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကခလုတ်ကိုဘယ်သို့မဟုတ်ညာနှင့်အမြန်နှုန်းတူလိုခြင်းရှိမရှိရွေးချယ်ခြင်းကိုသာအမှတ်အသားပြုသည်။ အမှိုက်ပုံး။
ဟယ်လို! ကျွန်ုပ်သည် MacBook Pro ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍ update လုပ်ပြီးသည့်အခါ home screen တွင်တပ်ဆင်ပြီးပါက၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပိတ်ပစ်ခြင်း၊ ပြန်လည်စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘာမှခွင့်မပြုပါ။ ငါ cursor ကိုရွှေ့နှင့်ငါကလစ်သောအခါ, သူကငါ့ကိုလျစ်လျူရှု။ ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာတစ်ယောက်ယောက်ကသိတယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အဖြေကိုငါတန်ဖိုးထားမှာပါ။
ဒေးဗစ်ခရစ်ယာန် Duque Gallego ဟုသူကပြောသည်
ငါ appstore ကိုဝင်ရောက်လို့မရဘူး, ဒါကြောင့်ငါ Yosemite မရနိုင်ပါ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း Macbookpro unibody တွင် hard drive ကို ssd နှင့် disk drive ကိုပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းရည် ssd ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
ငါ usb အားဖြင့် installation ကိုပြု။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
ငါ El Capitan operating system တစ်ခုလုံးကို update လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ငါအသုံးပြုသော software နှင့် system အသစ်နှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုတို့ကိုစလေ့လာခဲ့သည်။ ယခုသူတို့အများအားဖြင့်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, သင်သေးငယ်တဲ့အရာအချို့ကို fix ဖို့ Adobe ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်ထွက်လှည့်။
yosemite သို့မည်သို့ပြန်သွားရမည်ကိုရှာဖွေသောအခါဤဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်တွေ့ပြီး appstore တွင်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Appstore ကိုမသွားဘဲ installer ကို download လုပ်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ သတိထားမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီဟာကဖြစ်လိမ့်မယ်။
David Christian Duque Gallego အားပြန်ပြောပါ
ငါကတည်းက el capitan မှအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီဂိမ်းတစ်ခုမှအလုပ်မလုပ်ပါ။ shit !!!
ငါ့ပြproblemနာကဝနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်သောအရာမှကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်အားဖြေကြားမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ၂၀၀၉ အဖြူရောင် mabook အဆုံးတွင် 2009 Gb ram version os x2နှင့်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ Yosemite ကတည်းကငါလုပ်နိုင်တဲ့ပြproblemsနာတွေကိုဖတ်နေတယ်။ maci အဖြူနဲ့အနက်ရောင်ကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုချန်ထားခဲ့ပြီ။ Jordi ။ ငါအမှိုက်ထဲပစ်ထည့်လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်သိမ်းထားရင်ငါထင်မြင်ချက်တောင်မှပေးပါ။ mac el ကိုစုဆောင်းသူများမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ငါ ၀ င်းဒိုးကိုသွားမယ်၊ သေချာတာပေါ့၊ Mac charger တစ်ခုတောင်မှယူရို ၈၀ ကုန်ကျတယ်၊ ပြီးတော့အဲ့တာတွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့အဲဒါကိုတကယ်အခြေခံကောင်းရှိခဲ့ရင်သင်မပြင်နိုင်ဘူး။ steven အလုပ်များဖြင့်ဤသည်မှာမည်သည့်အရာနှင့်မျှမတူပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစနစ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်တွင်အစပြုသူဖြစ်ပြီး၊ ကံမကောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Mac အတွက်တစ်နှစ်ခန့်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ထံရောင်းချခဲ့သူသည်ငွေအမြောက်အမြားရရှိခဲ့ကြောင်းထင်ရှားသည်။ ။ ငါဝယ်ယူသောအခါ၎င်းသည်နှစ်များတစ်လျှောက်ရိုက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောရမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ထိုကာလ၌ကျွန်ုပ်၏ Mac ရှိခဲ့သော်လည်း os x10.8.5 ဗားရှင်းကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမအောင်မြင်ခဲ့သကဲ့သို့မှတ်ချက်များမှလည်းရှေ့သို့မတက်ရဲခဲ့ပါ။ ငါကြည့်ရှုခဲ့ဖူးသော်လည်းဘယ်တော့မှမအီးသို့မဟုတ် Mac သို့မဟုတ်ဗားရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မဖတ်ဖူးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုစုဆောင်းသူများအတွက်သိမ်းထားလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်နေသေးလျှင်၊ ၁၅ နှစ်ခန့်ကြာမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပြီးရောင်းပါလိမ့်မည်။ ငါရှေးဟောင်းအဘို့ငါပေးသောအရာကိုသုံးဆရှိမရှိကြည့်ရှုရန်လေလံသူသူသည်ငါ့ကို google chrome ကိုမှ system ကိုစွန့်ခွာလျှင်ငါကဒီမှာဝင်လိမ့်မည်ဆိုပါက Safari ကပင်ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်လျှင်ငါ nise ကိုအသုံးပြုသောစနစ်၏ဗားရှင်းများအတွက် updates များကိုဖွင့်မထားဘူး အနည်းဆုံး ၀ င်းဒိုးကိုသွားဖို့ငါ့ကိုအားပေးတယ်
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်က MacBook white SSD disk အသစ်နှင့်မည်သည့်စတိုးတွင်မဆို RAM နည်းနည်းထည့်ထားခြင်းကကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ၂၀၀၉ MacBook တွေဟာစက်ကောင်းတွေပါ။ ဒီအပြောင်းအလဲနှစ်ခုကြောင့် Mac အတွက်နှစ်အနည်းငယ်လောက်သေချာပေါက်ရလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာသင့်မှာ RAM ပိုများလာပြီး disk သည်ပျော်မွေ့သည်။
Rolando မက်ဒီနာ ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ MacBook Pro ရှိတယ်။ OSX 10.9.5 လည်ပတ်မှုစနစ်၊ ၂၀၁၂ မှတ်ဉာဏ် ၄ GB ။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုတော်တော်လေးစျေးကြီးတဲ့ Magic Mouse 2012 ကိုပေးခဲ့တယ်။ ai shop မှာနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ El Capitan Operating System ကို install လုပ်ဖို့နည်းပညာရှင်တွေကကျွန်တော့်ကိုအကြံပေးတယ်။ Macbook အသုံးပြုသူများအားလုံး၊ ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိသော Captain ကိုတပ်ဆင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်မရေမတွက်နိုင်သောအခက်အခဲများနှင့်ပြproblemsနာများကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့်အခါဖတ်ရှုပြီးနောက် operating system ကိုပြောင်းလဲခြင်းမပြုဘဲကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာအတွက်ဘယ် wireless wireless mouse ကိုအသုံးပြုမည်နည်း။
Jordi ။ ပထမ ဦး စွာသင့်ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ ငါမှာပြproblemနာရှိနေတယ်၊ ​​ပန်းသီး၊ status bar အပြည့်အစုံနဲ့ဘာမှမလုပ်တဲ့မျက်နှာပြင်ဖြူနဲ့ကျန်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အရန်တစ်ခုကိုမသိမ်းဆည်းပါ၊ Mac ကိုပြန်ဖွင့်ပြီး၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ကျွန်ုပ်အားဘာအကြံပေးသနည်း (docs, photos, etc)? ငါ Mac နဲ့ဒီလို ၆ ရက်လောက်နေခဲ့တယ်။
ပထမဆုံးကြိုးစားရမယ့်အချက်ကတော့ Boot Sound ကိုကြားပြီးနောက် ALT (option) ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် Mac ကိုစတင်ရန်နှင့်မည်သည့် partition (သို့) boot disk နှင့်သင်ပြသရန် menu သေးသေးလေးကိုစောင့်ရန်ဖြစ်သည်။
ဟယ်လိုဂျိုဒီ၊ Mac OS X Lion 10.7.5 (11G63b) မှကပ္ပတိန်သို့ operating system မှပြောင်းလဲလိုသည်။ ငါ့မှာ Imac 27 ရှိခဲ့တယ်။ ၂၀၁၁ နှစ်လယ်လောက်မှာ ၃.၄ GHz Intel Core i2011 ပရိုဆက်ဆာ၊ ၁၆ ကောင်၊ AMD Radeon HD 3,4M7MB ဂရပ်ဖစ်ရှိတယ်။ ငါအရန်ကူးယူကူးယူပြီးအထက်ပါကပ္ပတိန်သို့မွမ်းမံလိုသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၌ Adobe 16 suite ရှိပြီး CC 6970 သို့မွမ်းမံလိုသောကြောင့်၎င်းအားပေးသောပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသမျှကိုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။ ဒီအတွက် CC 2048 ပြproblemsနာရဲ့ Adobe Suite မှာ Captain ပြorနာရှိတာလား Mavericks ကို install လုပ်ပြီးကပ္ပတိန်ကိုစောင့်နေတာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ထင်တဲ့ operating system ကိုပြောင်းရလိမ့်မယ်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
Jordi က Macs တော်တော်များများ (ရိုးရှင်းသော app နည်းနည်းပြlittleနာများမဟုတ်တော့) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသောပြင်းထန်သော hardware ပြproblemsနာများကိုမြင်လျှင်ဤဆောင်းပါးကိုတာဝန်ယူမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အနည်းဆုံးသင်သည်ဤအရာကိုဖော်ပြသင့်သည်၊ သို့မဟုတ်ဆက်မလုပ်မီအချိန်တွင်စက်တစ်လုံးမိတ္တူကူးသင့်ကြောင်းအကြံပြုသင့်သည်။
Macbook ကိုတစ်ပါတ်တွင်မစတင်ပါ။ charger ပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်ဖျော့ဖျော့ပေါ့။ ငါဘာတွေပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာကိုအခုမသိသေးဘူး၊ ဘက်ထရီကအားမသွင်းပေမယ့် format ကို restart ပြန်စဖို့ကြိုးစားရမလားမသိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကနောက်တစ်ခါမလုပ်နိုင်လို့ပါ။ restart), ဒါကြောင့်ငါ၌အချိန်စက်၌တစ် ဦး မိတ္တူရှိခဲ့လျှင်, ငါ restore နိုင်လျှင်ငါမသိ, အဘယ်ကြောင့်ငါပိတ်ထားလျှင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတော့ဘူးဖွင့်ပါလိမ့်မယ်, စူပါနှင့်မတရားသော။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် MACBook PRO တွင် OS Capitan ထည့်ပြီးပါပြီ။ ကျားသစ်မှဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုခြစ်ရာများမှပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း Office Word နှင့် Excel တွင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုတွင်ငါသည် Office 2011 ကို .ISO ဖိုင်တစ်ခုထဲသို့တင်ရန်ကြိုးစားနေပြီးကျွန်ုပ်အတွက်ဖွင့်ရန်လမ်းမရှိတော့ပါ။ disk Utilities မှမဟုတ်ပါ။ ငါဘာလုပ်ရမလဲဘယ်သူ့ကိုမှမသိဘူးလား။
ပညာရှင် Hans ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည် Macintosh ကွန်ပျူတာများနှင့် unix အလုပ်စခန်းများပေါ်တွင်သီးသန့်အလုပ်လုပ်နေသည်မှာအနှစ် ၃၀ ရှိပြီ။ အိမ်မှာနှင့်အလုပ်မှာ။ OSX (linux-based) အတွက်အဆင့် ၉ ကိုကျင်းပခဲ့သည်။ ဒါဟာအနည်းငယ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြစ်ခဲ့သည် ... နောက်ပိုင်းတွင်အသစ်တစ်ခုကိုအားသာချက်အသစ်များကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။
အမြဲတမ်း ??? မလုပ်ပါနှင့်!!
Lion မှ El Capitan သို့ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်သိသာသောတိုးတက်မှုများကိုမတွေ့ရပါ။ လက်တွေ့ရှုထောင့်မှဘာမျှမထပ်မံထည့်သွင်းပေးပြီး၎င်းသည်ယခင်ကမရှိခဲ့သည့်ပြproblemsနာများကိုပင်ပေးသော bullshit လေးမျှသာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အခုတော့ရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုငါတွေ့ပြီ။ ဖန်သားပြင်များကိုပုံတူပွားခြင်း၊ သင်၏ TV ကိုစည်းမျဉ်းအချို့နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပါကတီဗွီတွင်ကြည့်ခြင်းစသည်တို့မရှိတော့ဘူး။ "Spaces" ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကဆိုးရွားလှသည်၊ မသက်မသာမဟုတ်၊ အထူးသဖြင့် Snow Leopard ၏ခမ်းနားသောဗားရှင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ Yosemite မှာ "Snow Leopard" နဲ့တော်တော်လေးဆင်တူတဲ့ Spaces ၏စီမံခန့်ခွဲမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသော "Total Spaces" ဆိုတဲ့ program လေးတစ်ခုကိုဝယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ် ... ဒါပေမယ့်ဒီပရိုဂရမ်ကို El Capitan မှာအသုံးမပြုတော့ပါ။
Snow Leopard ကတည်းက Mac လည်ပတ်မှုစနစ်၏ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုနှင့်ကျွန်ုပ်လုံးဝစိတ်ကျေနပ်မှုမရခဲ့ပါ။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာကြီးစွာသောနောက်ခံလူခဲ့ကြ! ငါထင်တာကတော့ဒီဟာသည်ပရိုဂရမ်ဟောင်းနွမ်းနေသောစီးပွားဖြစ်ပေါ်လစီသက်သက်သာဖြစ်သည်၊ သို့သော် "ဟာ့ဒ်ဝဲ" ကိုအသုံးချမည့်အစား၎င်းသည်ဆော့ဝဲလ်မှပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေရှိသည့်ကွန်ပျူတာသည်လုံးဝအသုံးမပြုနိုင်သောအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်လာသည့်အချိန်ရောက်လာသည်။ ထို့နောက် ... အခြား ၀ ယ်ရန်! ကြော်ငြာများနှင့်ရောင်းဝယ်သူများသည်လုံးဝသဘောမတူပါ
Ubuntu ကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ။ Snow Leopard အထိအလုပ်လုပ်တယ်။ အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ရန်ရွေးချယ်စရာရှိသင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါအတွက်မဟုတ်ဘဲအခြားသူတစ် ဦး ဦး အတွက်မယုံသင်္ကာဖြစ်စရာများပါ ၀ င်သောသတင်းများဟုခေါ်သည့် bullshit အသစ်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည်သေးငယ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများဆုံးရှုံးခြင်းကိုထိခိုက်စေသည်
ငါ Hans နှင့်သဘောတူသည်
Browser များကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်များသည် Snow Leopard ကိုမထောက်ပံ့တော့ပါ။ အများဆုံးတည်ငြိမ်ပြီးသဟဇာတစနစ်
Apple သည်၎င်းကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူများ (ဒီဇိုင်နာများ၊ ဗိသုကာများစသဖြင့်) အသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကမင်းကို Captain ရဲ့ installation ကိုအခမဲ့ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကဘယ်လိုပရိုဂရမ်တွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့လဲ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Snow Leopard မှ Captain သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပါကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။
Suitcase3ရော Adobe Suite CS5 ရော၊ ကျွန်တော့် workstation ရဲ့အခြေခံလည်းမဟုတ်ပါ။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် browser ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နှင့်ပေါ့ပေါ့အသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်ကလေးကစားသမားသို့မဟုတ်သင် Tubers, Tweet သို့မဟုတ် faceboqueros ၏အနတ္တ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဂရမ်များနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံး၏ software ကို UpDate ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအတင်းအကျပ်မထောက်ပံ့ပါ။
ငါ့မှာ retina macbook pro 2014 ပြ,နာရှိနေတယ်။ ငါမှာ El Capitan ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သိပ်မကြာသေးခင်က pad ကလုံးဝအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ မျက်နှာပြင်ဒါမှမဟုတ်အဖုံးဖွင့်ပြီးတဲ့အခါအမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ အိပ်ချိန်ကနေပြန်လာပြီးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ system reboots, El Capitan ကိုအခန်းကန့်ထဲမှာတပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းတဲ့တပ်ဆင်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်၊ အတူတူပါပဲ။ ဟုတ်တယ်၊ မှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ကောင်းတယ်၊ အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဒါကငါ့လိုဖြစ်လာတယ် နောက်ဆုံး update ဖြစ်သော ၁၀.၁၁ ။ ၃ တွင် hardware သည်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ : S
Roy Silva သို့ပြန်သွားပါ
ငါလွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်က MacBook Pro ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေ၊ အားသွင်းစရာမလိုဘဲ၊ အခုငါ charger အားငွေချေးချင်ပါတယ်။ ၀ င်ချင်တဲ့အခါမှာ administrator စကားဝှက်တကယ်ရှိပြီဆိုတော့ disk ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ငါပြန်ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် စက်ရုံရှိပေမယ့်ကျွန်တော့် installation CD ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာမေ့သွားခဲ့တယ်၊ ငါကတော်တော်လေးစက္ကူအလေးချိန်နဲ့တူသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကဘာလို့ Wi-Fi ကိုဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်ရတာလဲ၊ Lion မှာဒီဝန်ဆောင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ငါဘာကြောင့် iCloud နဲ့မဆက်သွယ်တာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဘာကြောင့်ငါမသိတာလဲ။ ဒီနှစ် format လုပ်ပြီးဖျက်လိုက်မယ်လား?
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်း ၁၀.၉.၅ မှ update လုပ်ပြီး Mac ကို windows နှင့် mac များခွဲလိုက်လျှင်၊ အခန်းကန့်သည်ဖျက်ပစ်သလား။
ယနေ့နံနက်ကျွန်ုပ်သည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့်ရုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို update လုပ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်သည် update တိုးတက်မှုဘားနှင့်အလယ်ရှိအလယ်အလတ်အဆင့်ရှိတိုးတက်မှုအခြေအနေတွင်ရှိနေပြီး၎င်းသည် ၅ နာရီကျော်မတိုးတက်သေးပါ။ ငါ၌များစွာသောအီးမေးလ်များရှိသည်မှန်သည်, ဒါပေမယ့် update ကိုတိုးတက်မှုတိုးတက်မပေးပါ။ ဒီမေးလ်မွမ်းမံမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့နည်းလမ်းရှိသလား။ ငါအီးမေးလ်ကိုဖွင့်ဖို့လိုပေမယ့်ငါ့ကိုပိတ်ခွင့်မပြုဘူး
ကောင်းပြီ, ငါလုံးဝနောင်တရ lentisisisisismo ။ ငါနှင်းကျားသစ်နှင့်အတူဆက်လက်အလုပ်အတွက်အလွန်ပျော်စရာ, browsers ကနေမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် dude နဲ့ငါအိမ်မှာ imac အပေါ်ကြိုးစားခဲ့, သူက mavericks ခဲ့ကြောင်းနှင့်မကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် အဆိုပါဆိုးဝါးကပ္ပတိန်အလွန်အလွန်နှေးကွေးနေသည်။
လူးဝစ်အော်စကာ Mongeotti လိုပက်ဇ် ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါဂျိုဒီ၊ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးရက်ကငါအယ်လ် Capitan (ကျွန်ုပ်ကိုထည့်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်း) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update ကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအခြိနျတှငျ, ငါ့ macbook, မှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်သော်လည်း, ငါ့ကိုပိတ်ပစ်သို့မဟုတ်ပုံမှန်အားပြန်လည်စတင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် သူတို့ပေးသောဖြေရှင်းချက်မှာ safe mode ထဲသို့ ၀ င်ပြီးပြtheနာကိုဖြေရှင်းရန်စောင့်ပါ။ ငါဘာသာရပ်လေ့လာဖို့စတင်ခဲ့ပါပြီ၊ ဤပြonနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်များနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်းသူတို့သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဝေးကွာသောကြောင့်၎င်းတို့သည်စက်ကိုနေရာတိုင်း၌ ဖြတ်၍ သင့်ကိုဖြတ်ကူးရန်ရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။ အချို့အလုပ်ဖို့လက်ချောင်းများ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်မှာသတင်းအချက်အလက်ရှိလား။
Luis Oscar Mongeotti Lópezအားပြန်ပြောပါ
ငါကပ္ပတိန်၏နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းရှိသည်၊ သို့သော်တနင်္လာနေ့ မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုပြုလုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည်လက်စွဲမှ လွဲ၍ အခြားအရာများကိုပိတ်ထားသည်။ ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်လဲ။ ငါဒီလိုဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်စက်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်စက်ကိုငါဖျက်ဆီးတော့မယ်။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ ငါကပ္ပတိန်ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဖြစ်ပျက်လာပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ manually မဟုတ်လျှင်၊ Mac ကိုပိတ်ထားစရာမလိုပါ၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်မှာအဖြေရှိပါကကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားချင်ပါသည်။
ဟယ်လို! ငါနေ့လည်ခင်းအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ချသည်။ ဘာမှမဖြစ်၊ ဒေါင်းလုပ်သည်ပြီးဆုံးခြင်းမရှိ။
Aurelio Griera Albacete ဟုသူကပြောသည်
Jordi Giménez, သင်၏ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်သူမှသံသယမရှိပါနှင့်သင်ရေလမ်းဖုံးလွှမ်းရန်အကြီးအဖြေရှင်းချက်များပေးသောဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၇၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်းပြပွဲကိုဖတ်ရှုခြင်းကကျွန်တော့်ကိုဆုတ်ယုတ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Windows အများစုကိုပြောနေဟန်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Mac ကိုပြုလုပ်နေချိန်တွင်။ ထိုကဲ့သို့သောအကြီးအအောင်မြင်မှုများမှဒီလိုက်ဖက်မှု။ Appel အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ဘာဝင်ငွေရနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သလော။ ကျနော်တို့ကသူတို့ပေးဆောင်ခြင်းအပေါ်၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ပြproblemsနာများရှိရန်နှင့်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမရှိဘဲအဆင်ပြေသွားခဲ့သည်။ သင်ကအမြဲတမ်း update လုပ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ဟုဆိုသည်။ ငါတို့ရှာသောအရာကိုမတွေ့ရှိလျှင်။ ငါ့အသက်တာကိုငါပြောပြီ၊ ငါကွန်ပျူတာသုံးပြီးအင်တာနက်ပေါ်မှာရတယ်၊ မိသားစုဓာတ်ပုံတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်၊ သီချင်းနားထောင်တယ်၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲတယ်၊ စာနဲ့ပို့တယ်။ Snow Leopard နှင့်အတူကျွန်ုပ်အလွန် ၀ မ်းသာကျေနပ်မိသည်။ အခြားသူများ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုပရိုဂရမ်များနှင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်အရာများနားလည်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်တိုင်ကြားမှုများကိုသာဖတ်ရှုသည့်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စုံတစ် ဦး ကအခါအားလျော်စွာရှာဖွေခြင်းကိုသွားသောနေရာဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ အဲဒါက Mac ရဲ့အတွေးအခေါ်မဟုတ်ဘူး၊ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ငါ iPad mini ကိုမမှတ်မိဘဲမွမ်းမံလိုက်တယ်၊ မွမ်းမံချက်ကတည်းက iTunes ကအသိအမှတ်မပြုဘူး။ El Capitan ကိုပိုမိုခေတ်မီသော iTunes ဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလျှင်၎င်းသည်၎င်းကိုမှတ်မိလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ iPod clasicc နှင့် ipod touch ကိုအသိအမှတ်မပြုတော့ပါ။ App Store သို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးမည်သည့်စားသုံးသူကဒီပရိုဂရမ်အကြောင်းမျက်ရည်ကျရသလဲဆိုတာပြောကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏အသက်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ငွေကြေးအခြေအနေသည်သဘောတူသည်။ ငါမွမ်းမံပါလိမ့်မည်၊ မငြင်းပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်နေသောကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသောလက်ရှိပြသနာများရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
Aurelio Griera Albacete အားစာပြန်ပါ
ငါ backup လုပ်စရာမလိုဘဲအယ်လ် Capitan သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးပါက၎င်းကိုထည့်သွင်းသောအခါကျွန်ုပ်၏ဖိုင်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး iPhoto ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ခဲ့သည်။ ငါဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအရာကိုပြန်ရရှိရန်နည်းလမ်းရှိလျှင်?
ကောင်းသောည၊ လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီကျွန်ုပ် OSX el capitan ၏နောက်ဆုံးသတင်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ စတင်ခဲ့သည်။ Mac ပြင်ဆင်မှုဖန်သားပြင်တွင်ဘောလုံးသည် ၂၄ နာရီပတ်လုံးလှည့်ပတ်နေသည်။ ဤသို့သောနှောင့်နှေးခြင်းသည်ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်သိလိုသလား။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? ငါတစ်ခုခုမှားနေတာကိုး။ သင့်ရဲ့အမြန်တုန့်ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Captain ၏ update ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ကွန်ပျူတာသည်အလွန်ပူလာသည်၊ အလွန်ဒေါသထွက်လာပြီး၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်ရကြောင်းမည်သူမဆိုသိသနည်း။ ထို့အပြင် Safari သည်လည်းသေကြေပျက်စီးသည်။ အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံခဲ့တယ်။
silvana က de pirela ဟုသူကပြောသည်
ငါ mac အသစ်တင်လိုက်ပြီ။ အခုကျရှုံးသွားပြီ။ ကွန်ပျူတာကိုပုံမှန်ပြန်မသွင်းချင်ဘူး၊ အရင်ကရရှိခဲ့တဲ့အသစ်အဆန်းတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ကွန်ပျူတာကိုပြန်ထားရတယ်။
silvana de pirela သို့ပြန်သွားရန်
အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအမျိုးအစား ၃% တွင်သင်ချက်ချင်းချေးငွေသို့မဟုတ်စီးပွားရေးချေးငွေလိုအပ်ပါသလား။ €3၏ချေးငွေ။ € 20,000,000,00 အတွက် အကယ်၍ ဟုတ်လျှင်၊ အီးမေးလ်ပြန်ပို့ပါ laurie_busines_loan@outlook.com လိုအပ်သောချေးငွေပမာဏ၊ နိုင်ငံ၊ Mobil သက်တမ်း။ ဤကုမ္ပဏီသည်စပိန်နိုင်ငံ၊ ဗလင်စီယာတွင်တည်ရှိသည်
Mrs laurie campbell အားပြန်ပြောပါ
အဲဒါဟာ El Capitan ကြောင့်လားဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်အတွက်ပြsolveနာတစ်ခုရှိတယ်၊ ခင်ဗျားအတွက်ငါ့အတွက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Power ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ငါ့အကောင့်က login ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ keyboard နဲ့ trackpad တွေကငါ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ ငါ log in လုပ်တဲ့အခါသူတို့နှစ် ဦး လုံးရပ်တန့်သွားပြီး USB နဲ့ keyboard နဲ့ mouse ထားရတော့မယ်။ အသုံးပြုသူအသစ်ပေမယ့်အတူတူပါပဲဖြစ်ပျက်စောင့်ရှောက်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!